တို့ဗမာ အစည်းအရုံး: 2012
[Freedom from Fear - 13] by Zaw Min Oo on Tuesday, December 13, 2011 at 8:29pm
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၌ ထုတ်ဝေသော စာအုပ်မှ စာမျက်နှာ ၁၈၆ - ၁၉၁ ကို မြန်မာပြန်သည်။ ဗိုလ်ဟူသော ဝေါဟာရမှာ အစိုးရရုံးအသုံးအနှုန်းတွင် ကြည်းတပ်မှ ဗိုလ် သို့မဟုတ် “လက်ဖ်တင့်နင့်” ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အများသုံးစကားတွင် စစ်အရာရှိများ၊ အမိန့်ပေးသူ များ၊ ခေါင်းဆောင်များကို “ဗိုလ်” ဟု ခေါ်လေ့ရှိပါသည်။
တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးရတော့မည် ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် တက်ကြွနေသော ထွန်းသစ်စ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့မြေပေါ်ခြေချလာသည်နှင့် ၎င်းတပ်မှ အရာရှိများကို ရာထူးမရွေး “ဗိုလ်” ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ လူအများစိတ်ဓာတ်အရှိန်မြင့်မား၍ ဘေးအန္တရာယ် ထူပြောသော စစ်တွင်းကာလတွင် လူစွမ်းကောင်းများ ဈေးကောင်းလေရာ “ဗိုလ်” တိုင်းကို စွဲမက်ဖွယ်ရာ စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်ဆန်ဆန် မသဲကွဲသော အတွေးဖြင့် ရှုမြင်ကြပါသည်။
၎င်းတို့အနက် ရှေ့ဆုံးမှ ထင်ပေါ်နေသူမှာ အောင်ဆန်းဖြစ်ပါသည်။ အသက် (၂၇) နှစ်ပင် မပြည့်သေးဘဲ စိတ်ဓာတ်အလွန်ပြင်းထန်ပြီး ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သဖြင့် မျိုးချစ်လူငယ် စစ်သေနာပတိအသွင်ဆောင်နေရာ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ သီချင်း၊ ကဗျာများ ရေးစပ်ရာ၌ စိတ်ကူးကွန့်မြူးလာကြပါသည်။
ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို အာဇာနည်အစစ်တွေ မွေးကြရမယ်
- ရာဇဝင်အတ္ထုပတ္တိလည်း ရှိရမယ်
မော်ကွန်းလည်း ထိုးလောက်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းရယ်
ဤကဲ့သို့ ချီးမြှောက်ခြင်းကြောင့် ပို၍ အသက်အားဖြင့်၎င်း၊ အတွေ့အကြုံအားဖြင့်၎င်း ပိုမိုသူများပင်လျှင် ယစ်မူးသွားနိုင်သော်လည်း အောင်ဆန်းမှာမူ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်စံသတ်မှတ်ချက်များကြောင့် တည်ကြည်ခိုင်မြဲ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြင့် လုံးဝစိတ်ထားမှန်အောင် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က ကျင်းပလေ့ရှိသော အခမ်းအနားတခုတွင် အောင်ဆန်းအား ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားမည်ဟု ချီးမွှမ်းသောဩဘာစာကို ဖတ်ကြားသောအခါ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်မဆိုနှင့်၊ ဗမာ့သမိုင်း၌ပင် နေရာမရသေးပါ ဟု အောင်ဆန်းက ကြွတ်ဆပ်ဆပ် မှတ်ချက်ချသွားခဲ့ပါသည်။
တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတလျှောက်တွင် စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည့် နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်တည်ထောင်လိုက်သော ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဘုရင်ခံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွင် ဒုဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသောအခါ၌ပင် အောင်ဆန်းက “ကျုပ်တို့ အခု မစရသေး၊ မလုပ်ရသေဘူး။ ဒါကြောင့် ချီးမွမ်းစရာရှိလည်း အခုချီးမွမ်းမခံချင်သေးဘူ။” ဟု ပြောနေတုန်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစဉ်အချိန်က ၎င်းသည် အမျိုးသားလူစွမ်းကောင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် “ဗိုလ်ချုပ်” ဟု သိရှိကြကာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံနေရသူပင် ဖြစ်ပါသည်။ “ဗိုလ်ချုပ်” ဟူသည်မှာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောက်တွင်ရှိသော အဆင့်ပင်ဖြစ်သော်လည်း အောင်ဆန်းက ရယူလိုက်သောအခါ ယင်းရာထူးအဆင့်သည်လည်း မြန်မာပြည်တွင် အတုမရှိ၊ ထူးခြားအရေးပါသော အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်မှုရှိလာပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဟူသည်မှာ တပ်မတော်၏ ဖခင်၊ အင်အားကြီးသော ကိုယ်ကျိုးမကြည့်သော ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဝေါဟာရအဓိပ္ပာယ်အရ “ဗိုလ်ချုပ်များ ကို အုပ်ချုပ်သူ” ဟု သဘောရပါသည်။
“ဗိုလ်” ပါဠိစာလုံး “ဗလ” (ခွန်အား) မှ လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ချီးကျူးထိုက်သော ခွန်အားနှင့် မလိုလားအပ်သော အင်အားကို ခွဲခြားရသည်မှာ မလွယ်ကူလှပါ။ “ကာယ” ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် “ဗလ” တို့ ပေါင်းစပ်လိုက်ပါက ဗလသက္ကာယ အကြမ်းဖက်ခြင်းဖြစ်လာပါသည်။ တနည်းဆိုရသော် လက်ခံနိုင်လောက်သော အကန့်အသတ် အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်၍ ခွန်အားကို အသုံးပြုသောအခါ ဖျက်ဆီးခြင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။
ဤအန္တရာယ်ကို ကိုယ်ကျင့်တရားဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း မပြုပါက နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် လူမှုရေးအပြောင်းအလဲများကြောင့် ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်နေသော အချိန်ကာလတွင် အောင်ဆန်းသည် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတိုက်ပွဲကို ဦးစီးဦးကိုင်လုပ်ခဲ့ရသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထွက် ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းသည် စိတ်နှင့် စိတ်ဓာတ်တို့၏ စွမ်းအားနှင့်ဆိုင်သော သဘောတရားကို ငယ်စဉ်ကပင် သိရှိမည် ဖြစ်၍ ဗလငါးပါး (ဣနြေ္ဒငါးပါး သို့မဟုတ် စိတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သောတရားများ) ကိုလည်း လေ့လာဆည်းပူးခဲ့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ သဒ္ဓါ၊ ဝိရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိနှင့် ပညာတို့ဖြစ်ပါသည်။ လောကီအလိုအရ ဗလငါးတန်ဖြစ်သော ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဘောဂ၊ မိတ္တ၊ စာရိတ္တဗလတို့သည် လောကုတ္တရာအကျိုးဆောင် ဗလများထက် နိမ့်ကျပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ အကျိုးပေးမည့်အင်အားများဖြစ်လာနိုင်ရန် ၎င်းတို့ကို စိတ်နှင့် စိတ်ဓာတ် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တာဝန်ရှိသော စစ်အဖွဲ့အစည်တခုနှင့် ပေါင်းစပ်ရမည့် ပေါ်ထွန်းစ စစ်တပ်၏ စစ်သေနာပတိအဖြစ်၎င်း၊ မတည်ငြိမ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများစွာ ပါဝငိနေသည့် အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှု၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်၎င်း စည်းကမ်းဖြင့် မထိန်းထားသော အင်အား၏ လက်တွေ့အန္တရာယ်များကို ၎င်းက ကောင်းစွာသိရှိထားသူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အောင်ဆန်းသည် ၎င်းတည်ထောင်ထားသော တပ်မတော်ကို စည်းကမ်းကြီး၍ ဂုဏ်ကျက်သရေရှိသော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရည်မှန်းထားပါသည်။
အနစ်နာခံခြင်း၊ ကိုယ့်စည်ကိုယ်ထိန်းခြင်း၊ ဖောက်ပြန်မှုကင်းခြင်း စသော ကျောက်သားပကတိခိုင်မာသည့် မြင့်မြတ်သောဂုဏ်အင်္ဂါများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသောတပ်မတော်၊ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအမြတ်မမျှော်ကိုးဘဲ တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မိမိ၏ခွန်အားကို လုံးဝပေးလှူထားသော တပ်မတော်သာဖြစ်ရမည်ဟု အောင်ဆန်းက ယူဆပါသည်။
လက်နက်အင်အားကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ အဖြစ် ထင်မှတ်စေမည့် သဘောထားများ၊ ရပ်တည်ချက်များကို ရှောင်ကျဉ်ပါရန် စစ်သည်တော်များအား အောင်ဆန်းက တိုက်တွန်းဆုံးမခဲ့ပါသည်။ အားကြီးသူက အားနည်းသူကို အနိုင်ကျင့်လိုသော လူ့သဘာဝကို ထောက်ပြ၍ မတရားပြုကျင့်သော အားကြီးသူတို့အား မကြောက်မရွံ့ဆန့်ကျင်ရန်နှင့် အားနည်းသူတို့အပေါ်တွင် ဖြောင့်မှန်တရားမျှတစွာ ပြုကျင့်ရန် အောင်ဆန်းက တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
“ဒီတပ်မတော်ဟာ ဒီနိုင်ငံ၊ ဒီလူမျိုးအတွက်၊ ဒီလူမျိုးတွေရဲ့ ကိုးကွယ်ရာ၊ လဲလျောင်းရာ၊ ဆည်းကပ်ရာဆိုတဲ့ အနေမျိုးဖြစ်ရမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဒီတပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အော့နှလုံးနာစရာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီတပ်မတော်ကို တည်ထောင်ထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အလကားပဲဖြစ်မယ်” ဟုလည်း သတိပေးခဲ့၏။ (၃၀-၁-၄၄)။
တိုင်းပြည်က ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ထိုက်သော ထူးချွန်သည့်တပ်မတော်ဖြစ်လာစေရန် အဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်အားထုတ်နေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထူးချွန်သဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှုပေးရန် အထူးအခွင့်အရေးရှိသော လက်ရွေးစင်လူတစု ဖြစ်လာရမည် မဟုတ်ပါ။ တပ်မတော်သည် လူတဦးတယောက်အတွက်၊ တဖွဲ့၊ လူတစု၊ အပါတီအတွက် တည်ထောင်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ တပြည်လုံးအတွက် တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အောင်ဆန်းက ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ပြောဆိုထားပါသည်။ ၎င်းတို့၌သာလျှင် ပြည်ချစ်စိတ်ရှိနိုင်သည်ဟူသော အယူအဆကို ခံယူထားကြသည့် စစ်မှုထမ်းများ၏ သေးသိမ်မှေးမှိန်သော အမြင်ကိုလည်း အောင်ဆန်းက ပယ်ချပါသည်။
“တခြား စစ်သားမဟုတ်ပေမဲ့ နိုင်ငံအတွက် အမျိုးမျိုးအနစ်နာခံ၊ အမျိုးမျိုးစွန့်စားလုပ်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိတာပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် စစ်သားမှ စစ်သားဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်သဘောထားကို ပြောင်းကြရမယ်” (၁၃-၃-၄၄)။
အောင်ဆန်းက စစ်သားများကို တင်းမာပြင်းထန်စွာ သတိပေးဆုံးမနေရသည့်အချက်မှာ တပ်မတော်ကို နှိမ်လိုသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ “ငါတို့ဟာ လက်နက်ကိုင်လူတွေဖြစ်ကြသော်လည်း မတရားမလုပ်၊ နိုင်ငံရဲ့ ရန်သူတွေမဟုတ်၊ နိုင်ငံရဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသဘောပေါက်အောင် ပြောပြခြင်းပဲ” ဟု ကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ (၁၃-၃-၄၄)။
တိုင်းပြည်၏ ဂုဏ်သိက္ခာဟူသည်မှာ ပြည်သူတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်သည်၊ ပြည်သူတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာသည် ၎င်းနှင့် ၎င်းစစ်သားများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ခွဲခြား၍မရဟု အောင်ဆန်းက ယုံကြည်ထားပါသည်။ သူလိုလားသော စံပြလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဆိုသည်မှာ စစ်မှုထမ်းတိုင်း၏ အပြုအကျင့်တို့သည် ၁၈ ရာစု နန်းတွင်းစာဆိုတော် လက်ဝဲသုန္ဒရ (၁၇၂၃-၁၇၉၉) ရေးသားဖွဲ့ဆိုထားသော နန္ဒိသေနပျို့ပါ သဘောတရားဖြင့် ပြည့်ဝနေမည်ဖြစ်သော တပ်ဖွဲ့ပင်ဖြစ်ရပေမည်။
လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှာမှု အမြင့်မားဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာသည်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ပြည်သူ့စိတ်နှလုံးကို သိမ်းကြုံး၍၊ ပြည်သူ့အင်အားကို ကိုးစားကြောင်း ပို၍ သိသာထင်ရှားလာပါသည်။
“လူတဦးတယောက်သည် မည်မျှလောက် စွမ်းပကားရှိစေကာမူ လူထု၏ အားပေးရိုင်းပင်းမှုမရှိဘဲလျက် ရာဇဝင်တွင်လောက်သော လုပ်ငန်းမျိုးကို ဖြစ်မြောက်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်” ဟု ယုံကြည်သည့်အလျောက် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွင် ပြည်သူတို့ကို ၎င်းနောက်မှ မြဲမြံစွာ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင် ရပ်တည်ကြပါရန် ပန်ကြားခဲ့ပါသည်။ မဟုတ်မမှန်သော ကတိများပေး၍၎င်း၊ မြှောက်ပင့်ပြောဆို၍၎င်း၊ ထောက်ခံမှုရယူသောနည်းကို ၎င်းက မသုံးပါ။
စစ်ကြောင့် အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေရသည့် မြေပေါ်တွင် လွတ်လပ်သော ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တိုင်းနိုင်ငံကို တညီတညွှတ်တည်း ဝိုင်းဝန်းတည်ထောင်ရန် ၎င်းနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့် ရိုသေလေးစားမှုတို့၏ တခုတည်းသောအခြေခံမှာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပွင့်လင်းမှုပင် ဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ယူဆပါသည်။ နိုင်ငံရေးတွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုတို့ကို ဦးစားပေး ကျင့်သုံးနေခြင်းသည် ပြည်သူလူထုကို စော်ကားရာရောက်သည့်အပြင် မိမိ၏ သိက္ခာသမာဓိကိုလည်း ဖောက်ဖျက်ရာရောက်ပါသည်။ ပြည်သူပြည်သားအများစုသည် အသိတရားဖြင့် အမှားထက်အမှန်ကိုသာ တန်ဖိုးထားပြီး အမှားအမှန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်ရှိသည်ဟု ယူဆ၍ အောင်ဆန်းက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းယူဆချက်သည် မှားယွင်းခြင်းမရှိပါ။ ၎င်း၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ပြည်သူလူထုက အပြည့်အဝ နားလည်သဘောပေါက်ကြပြီး စည်းလုံးညီညာစွာ ထောက်ခံအားပေး၍ တုံ့ပြန်သဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဧပြီလ၌ ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး (ဖဆပလ) အဖွဲ့မှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သူအများစု အနိုင်ရခဲ့ပါသည်။ အောင်ဆန်းသည် အစိုးရအာဏာ၏ အဆင်အယင်၊ အဆောင်အယောင်များကို ဂရုစိုက်လှသူမဟုတ်သော်လည်း ပြည်သူတို့က ရွေးချယ်ထားသော ခေါင်းဆောင်ဆိုသည့်ဂုဏ်ကိုမူ ရိုးသားစွာမြတ်နိုးသူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုတာဝန်များကို အောင်ဆန်း လေးလေးနက်နက် ခံယူထားပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ဟူသည်မှာ သေရမည် သို့မဟုတ် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ မိမိမှန်သည်ဟု ယူဆသောကိစ္စကို သတ္တိရှိရှိဖြင့် လုပ်ကိုင်ရဲသဖြင့် လူထုက ယုံကြည်စွာ ပေးအပ်ထားသော အရာဖြစ်သည်ဟု အောင်ဆန်းက မြင်ပါသည်။
တိုင်းပြည်အပေါ်တွင်ထားရှိရမည့် ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ပျက်ကွက်ပါက ပေးထားသော ခေါင်းဆောင်မှုကို ပြည်သူက ပြန်လည်သိမ်းယူရမည်ဟုလည်း လက်ခံပါသည်။ ၎င်းနှင့် ၎င်း၏ အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုင်းပြည်က ရိုသေလေးစားခြင်းမရှိတော့သောအခါတွင် ၎င်းတို့ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်မည်ဟု အောင်ဆန်းက ပြောသောအခါ အပြောသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ဖျက်မည်မဟုတ်သော ကတိကို ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်သူတို့က သိရှိကြပါသည်။
အင်အားဆိုသည်မှာ တရားမျှတမှန်ကန်သော ဦးတည်ချက်အတွက် အသုံးပြုမှသာလျှင် တန်ဖိုးရှိသည်ဟု ယုံကြည်သော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် စစ်သည်တဦးအဖို့ ဂုဏ်သိက္ခာမရှိဘဲ အုပ်ချုပ်ခြင်းသည် နှစ်လိုဖွယ်ရာမဟုတ်ပါ။ ပြည်သူ့လူစွမ်းကောင်းဟူသည် ပြည်သူ၏ မျှော်မှန်းတောင့်တချက်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
လက်တွေ့ဘဝရှိ ခေါင်းဆောင်များမှာမူ ပြည်သူတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်မည့် အတိုင်းအတာကိုသာ ရောင်ပြန်ဟပ်နေကြပါသည်။ ကြုံခဲလှသော သမိုင်းအချိန်အခါများတွင် မျှော်မှန်းတောင့်တချက်နှင့် တကယ့်လက်တွေ့ဘဝတို့ တထပ်တည်း တိုက်ဆိုင်သွားသောအခါ၌ ပြည်သူလူထုသည် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အင်တိုက်အားတိုက် အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ကြပြီး အချင်းချင်း ညီညွှတ်ကြပါသည်။ ယင်းအချိန်အခါကို သတိရနေခြင်းဖြင့် သိက္ခာမဲ့၍ အောင်မြင်မှုခြောက်ခမ်းသော ကာလများတွင် အားမွေး၊ ဂုဏ်ယူနိုင်ပါသည်။ အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သော တိုတောင်းလှသည့် ကာလအတွင်း၌ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့သည် ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ယုံကြည်အားကိုးခွင့်ရကြသူများတွင်ရှိသော မျှော်လင့်ချက်များ၊ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်သော အင်အားများဖြင့် ပြည့်ဖြိုးနေကြပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဗိုလ်ချုပ်က ၎င်းတို့ကို စည်းကမ်းနှင့် လုံ့လဝိရိယမရှိဟူ၍ သူ့ဝသီအတိုင်း တုံးတုံးတိတိ ပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်း ဆူပူသည့်အခါ၌ပင် ၎င်းတို့သည် စိတ်ပျက်ခြင်းမရှိကြဘဲ ဗိုလ်ချုပ်သည် မိမိ၏ ချို့ယွင်းချက်များကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ရန် ဆန္ဒရှိသကဲ့သို့ ၎င်းတို့ကိုလည်း ၎င်းတို့၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ပြင်စေလိုသည်ဟု အသေအချာသိရှိထားကြသဖြင့် ပို၍ပင် ကြိုးစားချင်စိတ် ပေါက်လာကြပါသည်။
“ဘဝဟူသည်မှာ အမှန်တရားနှင့် အပြစ်ကင်းစင်မှုကို ရှာဖွေသော မွန်မြတ်သည့် ခရီးစဉ်” ဟု အောင်ဆန်းက ယူဆထားပါသည်။ ဤသို့ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရာတွင် သူနှင့်အတူ တိုင်ပြည်ကိုပါ သယ်ဆောင်သွားရန် ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ လက်တွေ့မကျလောက်အောင် မြင့်မားသည်ဟု ဆိုရလောက်သော ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ အံ့ဩဖွယ်ရာအောင်မြင်မှုများသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၏ အရည်အချင်းကို၎င်း၊ ပြောသည့်အတိုင်းလုပ်၍ သိက္ခာသမာဓိနှင့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုသည် လက်တွေ့နိုင်ငံရေး၏ ထိရောက်သော အခြေခံဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သော အောင်ဆန်း၏ စွမ်းရည်ကို၎င်း ဂုဏ်ပြုရာရောက်ပါသည်။
အောင်ဆန်းသည် စစ်သည်တော်တဦးဖြစ်သည့်အလျောက် တိုက်ခိုက်ရမည်ဆိုလျှင် အသေအချာတိုက်သူဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် တိုက်ပွဲပြီးသောအခါတွင် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ လက်နက်ကို ဘေးဖယ်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကို လိုက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ လက်ထဲသို့ နိုင်ငံရေးအာဏာ ရောက်ရှိလာသောအခါတွင်လည်း “ကျုပ်က မေတ္တာနှင့် သစ္စာကို ရှေ့ထားပြီး အုပ်ချုပ်မယ်” ဟု ဟန်မလုပ်ဘဲ ရိုးသားစွာပြောနိုင်သူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအား ထောက်ခံသူများက ၎င်းသည် မိမိတို့၏ အသက်၊ မိမိတို့၏ ချမ်းသာမှုနှင့် မိမိတို့၏ ယုံကြည်မှုတို့ကို မဆင်မခြင် အကျိုးမဲ့အောင် လုပ်မည်မဟုတ်ဟု စိတ်ချနိုင်ကြပါသည်။
သူ၏ စကားအတိုင်း ဆိုရလျှင် အောင်ဆန်းသည် တိုင်းပြည်ကို “အရမ်းမဲ့ ဗြောင်းဆန်အောင်” လုပ်မည့် “နိုင်ငံရေး စတန့်မင်းသား” မဟုတ်ပါ။ ပြည်သူလူထုက ၎င်း၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို ယုံကြည်မည်ဆိုပါက တနှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းစွာရယူမည်ဟု ရဲရဲကြီး အာမခံခဲ့ပါသည်။ “ကျုပ်ဟာ ကျုပ်ကတိကို မဖျက်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိတယ်မဟုတ်လား”။ ဤစကားကို ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီ (၄) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအား လွတ်လပ်သော သမတနိုင်ငံဟု မကြေညာမီ (၁၁) လတိတိအလိုက ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရသောအခါတွင် အောင်ဆန်း ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။ သူတပါးအား ဆင်ခြင်တုံတရားကို လက်ခံ၍ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်း အစစ်အမှန်ကို တုံ့ပြန်တတ်သော အသိဥာဏ်ရှိသည်ဟု ယူဆသည့် အခြေခံသဘောထားရှိသူ အောင်ဆန်းသည် အာဏာရရှိရေးကို ကိုယ်ကျင့်တရားထက်ပို၍ ဂရုပြုကြသော နိုင်ငံရေးပြိုင်ဖက်တို့၏ သစ္စာတရားကင်းမဲ့ခြင်း၏ ဒဏ်ကို ခံသွားရပါသည်။ မြန်မာပြည်အတွက် ၎င်းထားရှိသော ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဂရုတစိုက်စဉ်းစားတွေးခေါ် အကြံဥာဏ်များထုတ်သကဲ့သို့ ၎င်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုအတွက် ဂရုတစိုက်ရှိခဲ့ပါက အောင်ဆန်းသည် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမည်မဟုတ်ဟု ပြောသူများရှိကြပါသည်။
သို့သော် သူသာ ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်ကျိုးငဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါက “ခေါင်းဆောင်သည် နိုင်ငံ၏အင်အားဖြစ်သည်” ဟူသောထုံးကို အသက်သွင်းပေးလိုက်သော ဗိုလ်တကာ့ဗိုလ် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများက ‘ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်’ ဟု သတ်မှတ်ထားသော ဗိုလ်အောင်ဆန်း ဖြစ်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ ။
ကျနော် တမ်းတ မိသော ဗိုလ်ချုပ်၏ အမှတ်တရများ ''
ကျနော်တို့ ဗမာနိုင်ငံ၏ သွေးစွန်းခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် နေ့ရက်ကြီးဖြစ်သော ( ၆၅ )နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့သို့။ ။
အာဏာကို ယစ်မူးတက်မက်သော၊ အာဏာသည် သေနတ်ပြောင်းဝတွင် ရှိသည်ဟု ယုံကြည်သော မသမာသူ အာဏာရူးတို့ကြောင့် တန်ဖိုးအနဂ္ဂ ကြီးမားလွန်းလှသော တိုင်းပြည်လူထုခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အပေါင်းပါတို့ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်၊။
ထို အကြောင်းရင်းခံများကြောင့် ယနေ့ ဗမာနိုင်ငံသည် ဆင်းရဲတွင်းနက်သော ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု့များဖြင့် ပြည့်နေသော တိုင်းပြည်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများအလယ်တွင် မျက်နှာငယ်စွာဖြင့် ယနေ့တိုင်အောင် ရပ်တည်နေလျှက်ရှိနေလေတော့သည်။
ဤသို့ ဇူလိုင်လ ရောက်လေတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို အထူးအောက် မေ့မိ၏.။တမ်းတ၏..။ ယနေ့လို ဗမာနိုင်ငံအာဏာရှင်အကျင့်ပျက်စစ်အစိုးရ ခေတ်တွင် ..ပို၍ပင် ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို တမ်းတမိ၏..။အောက်မေ့မိ၏..။ထို့ကြောင့် ကျနော်ဖတ်ဖူးသော မှတ်ဖူးခဲ့သော စာအုပ်များမှ ဗိုလ်ချုပ်၏ သူများနှင့်မတူ ထူးသော အမူအကျင့်လေးများအား " ဗိုလ်ချုပ် ၏ အမှတ်တရ များ ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အလွမ်းပြေ အဖြစ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ။
”အောင်ဆန်းဦး+ အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အဖေ...”
၁၉၄၆.ခု စက်တင်ဘာလ၊ ၂၉ ရက်နေ့ ဖြစ်လေသည်။၊ ရန်ကုန်မြို့့၏ ကောင်းကင်သည် မိုးရိပ်တိမ်လ်ိပ်များ ကင်းစင်လျှက် ကြည်လင်တောက်ပနေလေသည်၊။ ဗဟန်းလမ်းအတိုင်း တိရစ္ဆာန်ရုံဘေးမှ အလံပြဘုရားလမ်း အတိုင်း..တအားပြေးနေသော ဂျစ်ကားတစ်စင်း၏ နောက်ပိုင်းတွင် ကာကီစိမ်းရောင် စစ်ယူနီဖေါင်း ဖိုသီဖတ်သီဝတ်လျှက်၊ ခေါင်းတုံးဆံတောက်နှင့် လူရွယ်တယောက်၊ဘေးတွင် မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်းနှင့် လုံးကြီးပေါက်လှ မိန်းမတယောက်တို့ကို မြင်ရသည်၊။ ထိုစစ်ယူနီဖေါင်းဝတ်လူရွယ်သည် တခြားသူတော့ မဟုတ်၊ ။ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ သေနာပတိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်ပေသည် ။
ယမန်နေ့ကပင် ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ဝန်ကြီးအဖြစ် ရောက်ရှိသွားလျှက် ပူပူနွေးနွေး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ဆန်းအဖြစ် သူ၏ချစ်ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့်အတူ မြို့ထဲဖက်သို့ ထွက်လာ ခြင်းဖြစ်လေသည်၊။
တလမ်းလုံး စကားတခွန်းမှ မပြောဘဲ ၊ ငေးလာခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်သည် အလံပြဘုရားလမ်း (အော်တိုကား) တိုက်ရှေ့သို့ ရောက်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်အား လှမ်း၍ အင်္ဂလိပ်လို ပြောလိုက်လေသည်။
”ဘာဖြစ်လို့လဲ ဗိုလ်ချုပ် ...”
”ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး၊ ငါတို့နိုင်ငံရေး လုပ်လာတာ ဗြုန်းကနဲ ..ဒီလိုအစိုးရအဖွဲ့ထဲ ရောက်လိမ့်မယ်လို့ တခါမှ စိတ်မကူးခဲ့ဘူး။ ၊ခုတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ရာထူးယူလိုက် ရတော့ ငါ့စိတ်ထဲမှာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိရ ၊ ပျော်ကို မပျော်ပါဘူးကွာ"..
ကျနော်လည်း ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲ ကားကိုသာ ဆက်မောင်းနေတော့သည်၊
အမှန်မှာ ဘာကြောင့် မပျော်သလဲ ...ဟူသော မေးခွန်းကို ဗိုလ်ချုပ်နှင့် သူ့ဘေးတွင် ထိုင်လျှက်ရှိသော ဒေါ်ခင်ကြည်သည်လည်း.. ၄င်းအဖြေကို စိတ်တွင်းမှ လှိုက်လှဲစွာ သိကြသည်။ ထုတ်ဖေါ် မပြောကြ၍သာ။
ဖ.ဆ.ပ.လ ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ၄င်း တော်သလင်းလဆုပ်( ၁၂ ) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့က သူ့တွင် သမီးရတနာတဦး တိုးပြန်ပြီ ဟူသော မင်္ဂလာသတင်းကောင်းကို ကြားရသောအခါ မည်မျှ ၀မ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ရှာလေမည်နည်း။၊
သူ့ ၏ အကြီးဆုံး ကလေးနှစ်ယောက်မှာ ယောင်္ကျားလေးချည်း ဖြစ်ကြလျှက် ၊ တတိယကလေး မှာ မိန်းကလေးဖြစ်သည်။ ပြေးလွှားဆော့ကစားတတ်သည့် အရွယ်ဖြစ်သော သားနှစ်ယောက်ကို ကြည့်ရင်း တခါတခါ မျက်စိနောက်သောဗိုလ်ချုပ်သည် သူ၏ သမီးကလေးအပေါ် အချစ်တွေ ပိုမိလေသည်၊
ယခုတဖန် သမီးရတနာတဦး ထွန်းကားပြန်ပြီ။ များမကြာမှီသူက ရုံးကပင်ပန်းပြီး ပြန်လာတိုင်း လှေခါးထိပ် မော်တော်ကားဆိုက်ရာသို့ " ဖေဖေ ပြန်လာပြီ " ဟုဆိုကာ ၊ ဘ၀င်အေးစရာ အပြုံးကလေးများဖြင့် ဆီးကြိုတတ်သော သမီးကလေးနှင့်အတူ၊ အဖေါ်ရမည့် သမီးထွေး ကလေးကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရင်း ၊ ဗိုလ်ချုပ်( ၀ါ )အောင်ဆန်းဦးတို့အဖေ၊အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အဖေ၊ ဦးအောင်ဆန်း၏စိတ်တွင် နှစ်သိမ့်ကြည်နူးသွားလေသည်။
သို့သော်..ကံကြမ္မာက သူ၏မျှော်လင့်ချက် အဆောက်အအုံကို တဟုန်ထိုး မုန်တိုင်းဆင်၍ ၊ ချေမှုန်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်လေသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့( ဗိုလ်ချုပ်တို့ ၀န်ကြီးအဖြစ် ကျမ်းကျိန်သောနေ့ ) တွင် ဗိုလ်ချုပ်၏သမီးထွေးကလေးသည် သူ့ဖခင်၏ဂုဏ်ရှိန်သမ္ဘာကို လူ့ပြည်တွင် ၅ ရက်မျှ ခံစားကာ အနိစ္စရောက်သွား ရှာလေတော့သတည်း။
ထို သတင်းကို ကြားကြားချင်း ဗိုလ်ချုပ်တယောက် တချက်မျှ ငိုင်သွားကာ ...... ”အင်း ...အိမ်ထောင်ကျတဲ့ ၅ နှစ်ရာသီအတွင်း ကလေးလေးယောက်ရလို့ များလှတယ်ဆိုပြီး စိတ်တော့ ညစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရပြီးမှတော့.ကလေးကို မသေစေချင်ဘူး ...သိပ်နှမြောတာပဲဗျာ" ဟု ညည်းရှာလေသည်။
နိုင်ငံရေးကိစ္စ အ၀၀တွေကြောင့် အလွန်အလုပ်များလျှက် ရှိသော သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ နှလုံးသားထဲမှ ဖခင်တို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဟုန်လည်း ပေါက်ကွဲထွက်လာလေသည်။
ကြည့်စမ်းပါဦး..... တနင်္ဂနွေနေ့ကပဲ သမီးရတနာရခဲ့ပြီး ကြာသပတေးနေ့ကျသောအခါ အစိုးရအဖွဲ့ထဲဝင်ပြီး ၀န်ကြီးအဖြစ် ကျမ်းကျိန်ခဲ့သည်။ ၄င်းကြာသပတေး နေ့မှာပင် ချစ်သမီးလေးဆုံးရပြန်သည့် ကံကြမ္မာက သူ့အား လှောင်ပြောင်ကာ ပျက်ရယ်ပြုခြင်းပင် မဟုတ်ပါလော။
အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးရာထူးက .. ဘယ်လိုပင် မော်တော်ကား၊ရေဒီယို၊တယ်လီဖုန်းအစရှိသည့် အဆောင်အယောင်တွေများများ.. အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် ရတနာ (သမီးထွေးကလေး )ဆုံးရှုံးရသည့် ဗိုလ်ချုပ်ခမျာမှာ အဘယ်မှာလျှင်ပျော်နိုင်ရှာမည်နည်း၊
ထို့ကြောင့်ပင် " အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ၀င်ပြီး ရာထူးယူရတာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊ ငါတော့မပျော်ဘူးကွာ " ဟုပြောသော အကြောင်းသည်အထက် ဖေါ်ပြပါ အရေးပါသောအကြောင်းအချက်တချက်ဖြစ်ရမည်ဟု ကျွန်ုပ်တထစ်ချထင်လိုက်မိသည်။ ဖဆပလ အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေး၊ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများကျင်းပစဉ် ဗိုလ်ချုပ်အားအမှတ်တမဲ့ချောင်းကြည့်ဖူးသူတို့သည် သူ၏စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆွေးနွေးနေသောပြသာနာအကြောင်းအရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေပုံ ( Power of Concentration ) ကို သတိမပြုဘဲမနေနိုင်ကြချေ။
အစည်းအဝေးများဆက်၍ နေသလောက် ဆိုင်ရာပြဿနာတွေမှာ တခြားစီဖြစ်နေသည်ကို တချိန်လုံး အာရုံစူးစိုက်လျှက်၊တခုပြီးတခု ပြဿနာတွေကို အောင် မြင်စွာဖြေရှင်းသွားနုိုင်ခဲ့ခြင်းမှာချီးမွန်းအံ့သြဘွယ်ရာပင်တည်း။
” ဗိုလ်ချုပ် အဲသလို အစည်းအဝေးတွေ တခုပြီး တခုတက်ပြီး၊ စိတ်အာရုံ ( Concentrate ) စူးစိုက်နိုင်တာ တော်သကွာ ။ ငါတော့ တခါတလေ အစည်းအဝေးလုပ်နေရင်း စိတ်က တခြားကို လွင့်သွားတတ် လွန်းအားကြီးလို့ မနည်း ကို အားခဲပြီး အစည်းအဝေးထဲ စိတ်ရောက်အောင် ကြိုးစားရတယ် ” ဟု အစိုးရအဖွဲ့ထဲဝင်ခါက ကိုကြီးနု က ကျနော့်အား ပြောဖူးလေသည်။
၁၉၄၅ခုနှစ် စစ်ကြီးပြီးသောအခါ သမယတွင်၊ တော်လှန်ရေး မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်ကြီး၏ သေနာပတိကြီး ဂျင်နရယ်အောင်ဆန်းဆိုသူအား နိုင်ငံခြား သတင်းစာဆရာများ၊ သတင်းထောက်များသည် အထူးစိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိရာ၊ မကြာခဏ တာဝါလိန်း ဗိုလ်ချုပ်အိမ်သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံစကား ပြောရင်း ၊ မဟာမိတ် စစ်ဖက်အရာရှိကြီးများရပ်ကွက်တွင် ထင်ရှားလှသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စုံစမ်းအကဲခတ်လေ့ရှိကြ၏။
”ခင်ဗျား...ရှေ့ကို စစ်တပ်ကို ဆက်လက်ဦးစီး ဦးမလား..?”သို့မဟုတ် ”နိုင်ငံရေးကိုပဲ တရှိန်ထဲ လုပ်သွားမလား ..? ” ဟူသော မေးခွန်းကို ခဏခဏ မေးတတ်ကြသည်။
”ကျုပ်တော့ ...အခု စစ်လည်းပြီးပြီမို့ စစ်တပ်ကို ဆက်လက်ဦးစီးရှေ့ဆောင် မလုပ်တော့ပါဘူး၊ ကျုပ်ကိုယ်စား အခု ဒုတိယ စစ်သေနာပတိ ဗိုလ်လင်္ကျာကပဲ ဦးစီးပါလိမ့်မယ်၊ ကျုပ်အဖို့တော့ နိုင်ငံရေးကို ထိထိရောက်ရောက် ၀င်လုပ်လိုက်ဦးမယ်၊ ဒါလည်း ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့အထိပဲ။
လွပ်လပ်ရေးရပြီးရင် နိုင်ငံရေးက ထွက်ပြီး.. အေးအေးဆေးဆေး စာအုပ်ကလေး ဘာလေး ရေးမယ် ကြံတာပဲဗျာ ...။ ကျုပ်ရဲ့ အိမ်ထောင်( Family ) အတွက် ဂရုစိုက်ပြီး စီစဉ်စရာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ”
”ကလေးတွေ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး၊ပညာသင်ကြားရေးကိစ္စတွေလည်းကျုပ်ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်စီမံချင်သေးတယ်။ ” ဗိုလ်ချုပ် ၏ အဖြေက ဤသို့ချည်း သာတည်း ။
တခါတရံ ကလေးတွေ ဆော့ကစားရင်း လုကြငိုကြ လုပ်သောအခါ ၊ သားနှစ်ယောက်အား တခါတလေ စိတ်မရှည်သော ဒေါ်ခင်ကြည်က မိခင်တို့ သဘာဝ .. " တယ်ဆိုးတဲ့ ကောင်လေးတွေပဲ " ဟု ညည်းမိရာ၊ ကုတင်ပေါ် လှဲနေရင်း စာဖတ်နေသော ဗိုလ်ချုပ်က ... ”ငါ့ကလေးတွေ ..ဆိုးချင် ဆိုးပါစေကွာ ...၊ အရေးကြီးတာက ကလေးဆိုတာ ( Character ) =စိတ်ဓါတ်ကောင်းဖို့ရယ်...။( Love Truth ) =တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ခြင်း လိုလားတဲ့စိတ် ရှိဖို့ရယ်၊။ ဒါပဲ အရေးကြီးတယ် ..” ဟု သူ့ကိုယ်နှင့်လည်း နှိုင်းလျှက် သူ့၏ စိတ်ထဲတွင် ထင်မြင်မိသော ( Idea ) စံပြ ယောင်္ကျားကောင်းကို မျှော်မှန်းရင်း ပြောလိုက်လေသည်။
ဟုတ်ပါသည်၊။ သူ၏သားများကို တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ဓါတ်ကောင်းနှင့် တိုင်းပြည်သားကောင်းရတနာများ ဖြစ်စေချင်သည့် စေတနာတွေ...မေတ္တာတွေ ...ဗိုလ်ချုပ်တွင် အခြားအခြားသော ဖခင်နည်းတူ ရှိခဲ့လေသည်။ သားနှစ်ယောက်အနက် ..အကြီး (အောင်ဆန်းဦး ) မှာ သေးသေးသွယ်သွယ် အသားအနည်းငယ် ညို၏ ..။ မှတ်ဥာဏ်ကောင်း၏...။ လူကြီးများကဲ့သို့ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် စကားကြီး စကားကျယ်တွေလည်း ပြောတတ်၏...။
သားအငယ် ( အောင်ဆန်းလင်း ) မှာမူ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းနှင့် အသားအရေဖြူဖွေးပြီး၊ရယ်စရာမောစရာ အလွန်လုပ်တတ် ပြောတတ်၏၊။ ရဲဘော်တွေက သူ့ကို တခါတခါ ( ကိုလင်း ဘတ်ဖလိုး- ကျွဲကြီး) ဟုချစ်စနိုးခေါ်တတ်၏ ..။ သူ၏ ၀ိုင်းစက်ပြူးကျယ်သော မျက်လုံးကြီးများမှာ မိခင်ထံမှ ရရှိသော အလှများတည်း။
တညနေတွင် မိသားစု စုံညီစွာရှိစဉ် ဗိုလ်ချုပ်သည် သူ၏ကလေးများကို ကြည့်ရင်း ပီတိဖြစ်ရာမှ သူ့စိတ်ထဲမှ ထင်မြင်ဝေဖန်ချက်များကို ထုတ်ပြောလေသည်။
”အကြီးကောင် ငဦး.. ကတော့ ( Very Serious ) ..အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် တည်တာရယ်..မှတ်ဥာဏ်ကောင်းတာရယ်ကို ထောက်တော့ သူ့အဖေလို လာမယ်ထင်တာပဲ၊ အငယ် ..ငလင်းကြီးကတော့ သူ့ကြည့်ရတာ ရူးပေါပေါကြီးပဲ၊ ပေါ့ပေါ့စား ပေါ့ပေါ့နေရင်း..ကြီးလာမယ့် အကောင်ကြီးပဲကွ..။ ကြီးလာရင် တေ များ တေ ဦးမလား မသိဘူး။ ဘာပဲပြောပြော ..ငါ့သမီးလေး (အောင်ဆန်းစုကြည် ) ကတော့ အားလုံးထဲမှာ အလိမ္မာဆုံး..ချစ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲ..”
” အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံရေးသမား သခင်အောင်ဆန်း ”
ဗိုလ်ချုပ်သည် ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကပင် သူပုန်စိတ်ထားရှိပြီး အကြံကြီးသူ ဖြစ်သည်။ ငါ့မြင်းငါစိုင်း စစ်ကိုင်းရောက်ရောက် ..ဟူသော လူစားမျိုးဖြစ်သည်၊။ လူရိုင်းစိတ် ထားရှိပြီး ၊လူယဉ်ကျေးများနှင့် အသားမကျခဲ့။ မျက်နှာလို မျက်နှာရ နှင့် အထက်လူကြီးများအား တိုင်တော ဂုန်းချောတတ်သူများကို ရွံရှာစက်ဆုပ်သူဖြစ်သည်၊
ဗိုလ်ချုပ်သည် လမ်းသွားလျှင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုပြုလေ့ မရှိသည်မှာ သူ့အကျင့်တခု ဖြစ်သည်၊။ သူကား အစဉ်းစားကြီးသူ ဖြစ်သည်။ သူ၏စဉ်းစားခြင်း အလုပ်မှ တပါး အခြားမည်သည့်ကိုမျှ ဂရုမစိုက်တတ်၊
ဗိုလ်ချုပ်သည် အခြားသူများကဲ့သို့ နေ့တွင် အလုပ်လုပ်လေ့မရှိ၊ ညမှသာ တညလုံး စားပွဲတွင်ထိုင်ကာ အလုပ်လုပ်လေ့ရှိသူဖြစ်သည်၊ ။ အရေးကြီးလျှင် တညလုံးမအိပ်ဘဲ၊ အလုပ်လုပ်တတ်သည်၊ စိတ်လည်းအလွန်မြန်သူဖြစ်သည်။
တို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင် အဆင်းရဲ အခံနိုင်ဆုံး နိုင်ငံရေးသမားကို ပြပါဆိုလျှင် ဗိုလ်ချုပ်ကို ပြရမှာ ဖြစ်သည်၊ စားရမဲ့၊ သောက်ရမဲ့၊ ၀တ်ရမဲ့ဖြစ်နေစေကာမူ ၊ သူ့အား လစဉ်ငွေကြေး လိုသလောက်ထောက်ပံ့နိုင်သော သူ့မိခင်ကြီးကို ဒုက္ခ မပေးခဲ့ပေ။
ဗိုလ်ချုပ်သည် ”အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အား လက်နက်ကိုင်ပြီး မတော်လှန်နိုင်လျှင် ဘယ်တော့မှ မလွတ်လပ်နိုင်ဘူး ...” ဟု ယုံကြည်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
သခင်အောင်ဆန်းသည် ”စားလည်းနိုင်ငံရေး၊ အိပ်လည်းနိုင်ငံရေး။ ၊ နိုင်ငံရေးသာ အမိ၊ နိုင်ငံရေးသာ အဖ၊ ”ဟု ခံယူပြီး အားလုံးကို လစ်လျှု ရှုခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်၊။ သူ့တွင် နိုင်ငံရေးဝိညာဉ်ကား ပြင်းထန်လှ၏ ၊ နိုင်ငံရေးတခုတည်းသာ လုပ်သော လူတဦး ဖြစ်သည်၊ သူသည် ရိုင်း၏ ..ကြမ်း၏ ..ကြောင်၏ ..။ ကိစ္စမရှိ။ သူသည်ဧည့်ခန်းဆောင်မှ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်း မဟုတ်၊။ ”တခုတည်းသော ယုံကြည်ချက်နှင့် တခုတည်းကိုသာ လုပ်သော နိုင်ငံရေးသတ္တ၀ါ ဖြစ်၏ ၊ ထို့ကြောင့် ကိစ္စမရှိ ..” ဟု ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာက အောင်ဆန်း ..သို့မဟုတ်..အရိုင်း ..ဟု ...သူ့ ရုပ်ပုံလွှာတွင် ရေးခဲ့၏။
ဗိုလ်ချုပ်၏ ချစ်စရာ အကောင်းဆုံး အင်္ဂါတခုမှာ " လုံ့လ ၀ီရိယ ဇွဲ " ရှိခြင်းဖြစ်သည်၊ ဗိုလ်ချုပ်သည် စကားမပြောလျှင် လုံးလုံး မပြော၊ ။ ပြောလျှင်လည်း အိပ်နေသူကိုပင်နှိုး ၍ ပြောတတ်သည်။ စားစရာမရှိလျှင် အငတ်ခံပြီး၊ စားစရာရှိလျှင် အ၀စားတတ်သူ ဖြစ်သည်၊ ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀က အခြားကျောင်းသားများက ”အောင်ဆန်း ဆိုတဲ့ ငတိ ဟာ နည်းနည်းမှ ဆိုရှယ်မဖြစ်ဘူး” ဟု ပြောခြင်းခံရသည်၊ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်သည် စာအလွန်ဖတ်သူ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် ပင်နီအင်္ကျီ ဂုတ်ပြဲ ၊ ချည်လုံချည်အဟောင်းကို ၀တ်၍ ဆံပင်စုတ်ဖွားနှင့်နိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
" သမိုင်းတွင် ဗမာတပြည်လုံး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို လက်နက်မဆောင်ဘဲ၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ...ကျန်စစ်သားနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လောက် ဘယ်သူမှ ထမြောက်အောင်မြင်ခြင်းမရှိ" ဟု သမိုင်းဆရာများက ဆိုကြသည်။
” မိခင်ကြီး အမေစု နှင့် သား ဗိုလ်ချုပ် ”
အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို သခင်လှဖေ ( ဗိုလ်လင်္ကျာ ) က ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ဖူးလေသည်။
သခင်အောင်ဆန်းသည် သခင်ဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် မိခင်ထံသို့ မပြန်သလောက်ပင် ရှိခဲ့သည်၊ တခါသော် သူ့မိခင်ကြီး အမေစုသည် သူနှင့်တွေ့ရန် ရန်ကုန်သို့ဆင်းလာ၏ ။ ရန်ကုန်တွင် ကြည့်မြင်တိုင်ရှိ ဆွေမျိုးများထံတွင် တည်းခို၏ ။ အောင်ဆန်းသည် သူ့ မိခင်နှင့်တွေ့ဆုံရန် အသွားတွင် ကျနော့်ကိုလည်း အဖေါ် ခေါ်သွားလေသည်၊။
မိခင်ကြီးအမေစုသည် အလွန်စိတ်ပူပန်စွာဖြင့် သူ့သားငယ်အား ကြင်နာယုယစွာ ကြည့်ရင်း၊ မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို တတွတ်တွတ် မေးနေတော့သည်။ သို့သော် အောင်ဆန်းသည် ခေါင်းအောက်ငုံ့ကာ မတုန်မလှုပ် ထိုင်နေပြီး၊ တခါတခါ မှသာ သူ့မိခင်ကြီးအား ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် မော်ကြည့်ဖော်ရလေ သည်။
သူ၏ အေးတိအေးစက်နိုင်လှသောအမူအယာကြောင့် ကျနော်ပင်လျှင် ကြားက စိတ်တိုလာမိသည်။ သူ၏ အဖြေများသည် တိုတောင်း၍ အေးစက်စက်နိုင်လှသည်။ ၁၅ မိနစ် ..မိနစ် ၂၀ ခန့်သာရှိသေးသည်တွင် ထ၍ ပြန်ရန် ဟန်ပြင်တော့သည်။ ပြန်ထွက်လာတော့သည်။ မိခင်ကြီးအားလည်း နှုတ်မဆက်ခဲ့ ချေ။
သို့သော် သူသည် လမ်းတွင် စကားတခွန်းမှ မပြောဘဲ သူ့အလွန်ချစ်သော အမေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာသည်။
သူ့မိခင်ကြီး ပြန်သောနေ့တွင်လည်း ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ဘူတာရုံသို့ လိုက်ပို့ကြ၏။ ဘူတာရုံတွင် အောင်ဆန်းသည် ငြိမ်ချက်သား ကောင်းနေပြန်သည်။ မီးရထား စထွက်လျှင် ထွက်ခြင်း ..သူသည် ရုတ်တရက် ထိုင်ချလိုက်ကာ ..ရထားပြတင်းပေါက်မှ ခေါင်းပြူကာ သားအား စိုက်ကြည့်နေရှာသော မိခင်ကြီးကို ဒူးထောက်၍ ၊ကန်တော့တော့သည်။
ကျနော်တို့ ဘူတာ မှ လမ်းလျှောက်၍ ပြန်လာစဉ် သူက.. ”ကျနော်ဟာ သားအငယ်ဆုံးပဲ၊ ကျနော် နိုင်ငံရေးလုပ်တာကို အမေက ဒါလောက် မကန့်ကွက်ပါဘူး။ ကျုပ်က အေးတိအေးစက်နိုင်တာ၊ စာမရေး ဘာမရေးနဲ့ စိမ်းကားတာကို အမေ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်။ အမေက သနားပါတယ် " ဟု ညည်းတွားပြောရှာသည်။
သခင်အောင်ဆန်းသည် သူ့အမေကို အခြားညီအကိုမောင်နှမတွေ ချစ်သည် ထက်ပို၍ ချစ်သလို ၊ သူ့အမေကလည်း သူ့အငယ်ဆုံးသားအပေါ် အခြားသားသမီးများထက်စာလျှင် ပိုချစ်ခဲ့ရှာသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် အမေချစ်သော သားတယောက်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသားဆန်ဆန် အမေကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသော၊ ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်သော သားတယောက်အဖြစ် ကျနော်တို့တွေ့လိုက်ရပါတော့သည်။
သခင်အောင်ဆန်း ၏ ဖခင်သည် သူ ရေနံချောင်းမြို့အမျိုးသားကျောင်း ၈ တန်း တွင် ပညာသင်ကြားနေစဉ် ကတည်းက ဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှာစ၍ သူ့တွင် ခင်တွယ်စရာ၊ အားထားစရာ၊ညှာတာစရာဆို၍ မိခင်ကြီးတဦးသာ ကျန်ရှိပေတော့သည်။ ယခုကား အမေနဲ့လည်း အဝေးကြီးဝေးခဲ့ပြီ၊ တမာပင်ရိပ်ကလေး တွေ၊ မန်ကျည်းပင် ရိပ်ကလေးတွေနှင့်လည်း ဝေးခဲ့ပြီ၊။ ကံကော်ပင်၊အင်းလျှား၊ပဲခူးဆောင် ၊ တကယ်တော့ သူ့အမေလိုပင် သူ့အနွံအတာကို ခံခဲ့သော၊ သူ၏ ရာဇ၀င်မြောက် ဒုတိယ မိခင်သဖွယ် သူ့ကို လှပဆင်းသစ်စေခဲ့သော... ချစ်သော ယူနီဗာစီတီ ပရ၀ုဏ်နှင့်လည်း ဝေးခဲ့ရလေပြီ။
”လွတ်လပ်ရေးအောင်ပန်း မြဲဆင်မြန်း ”
စစ်ကြီးအပြီးတွင် ဖက်ဆစ်ဝါဒ လုံးဝ ကျဆုံးသွားခဲ့ရသလို ...နယ်ချဲ့လက်အောက်ရှိ ကိုလိုနီနိုင်ငံ အများအပြားမှာလည်း လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ..အိန္ဒိယ၊ ဗမာ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့မှာ တနှစ်စီသာခြားပြီး မရှေးမနှောင်းမှာပင် လွတ်မြောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်ဗြိတိသျှ လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သလို ..၁၉၄၈ ခုနှစ် တွင် ဗမာနိုင်ငံသည်လည်း ဗြိတိသျှ လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်ကလည်း ကူမင်တန်အုပ်ချုပ်မှုကို တော်လှန်၍ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်ကာ လွတ်မြောက်လာခဲ့လေသည်။
အမှန်မှာမူ ဗမာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်..လန်ဒန်တွင် ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ..အောင်ဆန်း..အက်တလီ စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုး စဉ်ကပင် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးသည် ကတိကဝတ် ရခဲ့ပြီးသား ဖြစ်နေပေသည်၊။ သို့သော်..နောင်တနှစ်မှပင် ရက်ကောင်းရက်မြတ်ရွေးချယ်ကာ ကြေငြာခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏ ။
ဗိုလ်ချုပ်၏ ထင်ရှား လူသိများလှသော ဓါတ်ပုံမှာ လန်ဒန်မြို့ ဒေါင်းနင်းလမ်း ၀န်ကြီးချုပ်နေအိမ်ရှေ့တွင် ဂရိတ်ကုတ် စစ်ဝတ်စုံနှင့်ခန့်ညားစွာ ရိုက်ကူးထားသောပုံပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စစ်ဝတ်စုံမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဒေလီမြို့တွင် ခေတ္တရပ်နားစဉ်၊ ဂျဝါဟာလာနေရူးက လက်ဆောင်ပေးအပ်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်၊။
နေရူးက သူ့၏ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေကြီး အောင်ဆန်း၏ အင်္ဂလန်သွားမည့်ဝတ်စုံကို ကြည့်ရင်း လွန်စွာ စိတ်မသက်မသာလှသဖြင့်၊ စစ်ဝတ်စုံ ချုပ်တတ်သည့် စက်ချုပ်အဖွဲ့တဖွဲ့ကို စည်းရုံးဆွေးနွေးပြောဆိုကာ ညတွင်းချင်း ချုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အနေဖြင့် လန်ဒန် လွတ်လပ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် နွေးထွေး တည်ငြိမ် ခန့်ညားစွာဖြင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း ၀တ်စုံမှာ သူ့၏ ဘ၀တသက်တာ ၀တ်ဆင်ဖူးသမျှတွင် တခုတည်းသော အကောင်းဆုံးဝတ်စုံပင် ဖြစ်တော့သည်။
”( ၁၉ ) ဇူလိုင် မမေ့နိုင် ”
ဗမာနိုင်ငံ၏ တပ်မတော်ဖခင်ကြီး၊ လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာကြီး ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အာဏာရူး မသမာသူလူတစုတို့က ၁၉၄၇ ခုနှစ် ..ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသလို ...အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ မှာလည်း ၁၉၄၈ခုနှစ်.ဇန်န၀ါရီလ. ၃၀ ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရလေသည်။
အိန္ဒိယ လုပ်ကြံမှုတွင် ဂန္ဒီတဦးတည်း သေဆုံးခဲ့သော်လည်း ...မြန်မာပြည်တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော လုပ်ကြံမှုသည်ကား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအ၀င် ဗမာအစိုးရ တဖွဲ့လုံး အာဇာနည် ၉ ဦးတိတိ လုပ်ကြံခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရက်စက်မှုကြီးကို နှစ်ပေါင်း ( ၆၅ ) နှစ် တိုင် ပြည်သူပြည် သားတို့ မမေ့နိုင်၊။ ကမ္ဘာတည်သရွေ့့့ မေ့နိုင်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်။
”လွတ်လပ်ရေး ရ ပြီးရင် ငါတော့ နိုင်ငံရေးကထွက်ပြီး စာတွေရေးမယ်..၊ နိုင်ငံရေးရာဇ၀င် ၊ အိမ်ထောင်ပြုရေး၊ သားသမီးစောင့်ရှောက်ပြုပြင်ရေး၊ အချစ်ပြဿနာ၊ ( sex )= လိင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ ငါ့အယူအဆ သဘောထားတွေကိုပါ စာအုပ်ရေးဦးမှာပဲ " ဟု ..၁၉၄၇ ခု။ ဧပြီလက မေမြို့ တွင် အနားယူနေရင်း ပြော ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်သည် ..အထက်ပါ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်လေးများ မပြည့်မီ...ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လူတစုလက်ချက်ဖြင့် ရေတိမ်နစ်ခဲ့ရရှာလေတော့သည်။
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် ဗမာနိုင်ငံလုံးက နှမြေတသ ကြသည်ထက်၊ သူ့ကို ဘ၀လက်တွဲဖေါ် ပါရမီဖြည့်ဖက်အဖြစ် ၊ ချစ်သောခင်ပွန်းသည် အဖြစ် ကောင်းကောင်းကြီးသိခဲ့သော ဒေါ်ခင်ကြည်၊ အောင်ဆန်းဦး၊ အောင်ဆန်းလင်း ( ကွယ်လွန် ) နှင့်.. အောင်ဆန်းစုကြည် တို့၏ စိတ်ဝယ် ..မည်သို့မည်မျှ ယူကြုံးမရ ဖြစ်ရှာလေမည်နည်း။ ။
ကျနော် မောင်လူဝေး ပါ။
၁၃. ၇.၂၀၁၂ .
ဆရာချိန်( ပဲခူး ) =ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ သမိုင်းရုပ်ပုံလွှာ..(သို့)...နှစ်ယောက်မရှိသည့် တယောက်တည်းသော လူထုခေါင်းဆောင်
တက္ကသိုလ်နေ၀င်း =ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဂီတအနုပညာ
.မောင်စိမ်းနီ= စာရေးဆရာ ကိုအောင်ဆန်း
နိုင်ငံတော် သီချင်းစာသားတွေကို ဘယ်သူတွေ စိတ်ကူးရခဲ့သလဲ
တို့ဗမာအစည်းအရုံးသည် ခေတ်လယ် ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲ လှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်တွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည် ။ ၁၉၃၀ မေလ ၂၆ ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ခေတ်လူငယ်တို့သည် တို့ဗမာ ၀ါဒကို စွဲကိုင်လာကြသည်။ နိုင်ငံပြုစာတမ်းများဖြင့် လှုပ်ရှားလာကြသည်။ တို့ဗမာသီချင်းသည် နိုင်ငံတော် သီချင်း၏ သန္ဓေတည်ရာဖြစ်သည် ။
ရေးစပ်တီးကွက်ရှာသူမှာ မန္တလေးဂီတလောကမှ ရန်ကုန်သို့ ဆင်းလာသော ၀ိုင် ၊ အမ် ၊ ဘီ ဆရာတင်ဖြစ်သည် ။ ရန်ကုန်တွင် ၀ိုင်အမ်ဘီဆရာတင်ဘ၀မှ သခင်ဘ၀သို့ကူးပြောင်းသွားသည်။ သခင်ဘသောင်း ၊ သခင်သိန်းမောင် ၊ သခင်လှဘော် ၊ သခင်သာဒိုး ၊ သခင်အုန်းဖေ ၊ သခင်ကျော်ထွန်းစိန် ၊ သခင်ဖိုးနီတို့နှင့် စာသားညှိနှိုင်းရယူသည် ။
တို့ဗမာသီချင်းသည် သမိုင်ဝင်တေးဖြစ်လာသည် ။ တို့ဗမာသီချင်းဖွင့်ပွဲကို ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇူလိုင် ၁၉ တွင် သထုံဆောင် သဟာယနှင့် စာဖတ်ခန်း၌ ပထမဆုံးသီဆိုသည် ။ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူတို့နှင့် သတင်မိတ်ဆက်သည် ။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး၏ ရာဟုထောင့်တွင် ကျင်းပသည် ။ တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန် နည်းပြဆရာ သခင်ဘသောင်းက ဦးစံထွန်း တန်းဆောင်းသစ်ကြီး၌ တို့ဗမာသီချင်း၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြသည် ။ ဂီတစာဆို သီချင်းဆရာ ၀ိုင် ၊ အမ် ၊ ဘီ ဆရာတင်က ခေတ်ပေါ်တူရိယာမျာနှင့် တွဲဖတ်၍ တို့ဗမာသီချင်းကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သီဆိုဖွင့်လှစ်သည် ။
၁၉၆၃ ခုနှစ် ၊ဇွန်လ ၂၇ ရက်၊ မြင်းခြံမြို့တွင် ကျင်းပသော ဒုတိယမြောက် တို့ဗမာ အစည်းအရုံးညီလာခံတွင် တို့ဗမာသီချင်းကို အမျိုးသားသီချင်း အဖြစ် တညီတညွတ်တည်း သတ်မှတ်ပြဌာန်းခဲ့သည် ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ကျဆုံးပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ညီလာခံတွင် နိုင်ငံတော်အလံ ၊ နိုင်ငံတော် တံဆိပ် ၊ နိုင်ငံတော်သီချင်း တို့ကို ရွေးချယ်သည် ။ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် တတိယညီလာခံ ၊ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင်မှ အပြီးသတ်ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည် ။
နိုင်ငံတော်သီချင်းကို တို့ဗမာ သီချင်းမူရင်းမှ စကားလုံးအချို့ကိုအနည်းငယ် ပြုပြင်လိုက်သည် ။ မူလတေးသွားအတိုင်း ထားရှိသည်။
သံပြိုင်မှ ကမ္ဘာမကြေ ၊ဗမာတစ်တွေ (ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့မြေ)၃ (တို့ဗမာ)၃...........တိုင်းရင်းသာအကုန်အစင် ၊တို့ပြေလို့မှတ်ထင် ၊တို့ဝတ္တရားပင် တို့ဗမာသခင် သံစဉ်ကို ယူသည် ။
(ကမ္ဘာမကြေ ၊ဗမာပြည် တို့ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ)၂ ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ ၊ ဒါတို့ပြေ ၊ဒါတို့မြေ ၊တို့ပိုင်နက်မြေ ။ တို့ပြေ၊တို့မြေ၊ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တွေ ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ ၊ တို့တာဝန်ပေ ၊အဖိုးတန်မြေ ဟူ၍ ဖြစ်လာသည် ။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် တတိယညီလာခံတွင် နိုင်ငံတော်သီချင်းသည် တရားဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည် ။
နိုင်ငံတော်အလံ ၊ သီချင်းနှင့် တံဆိပ်ကော်မတီတွင် ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်။ နောင်တွင် ကော်မတီဖြည့်စွက်ခန့်ထားရာတွင် ပန်းချီဦးငွေကိုင် ၊ ဦးအုန်းလွင် ၊ ဦးဘသန်း ၊ ဒဂုန်ဆရာတင် ၊ ဦးခင်ဇော် နှင့် ဦးထင်ဖတ်(မောင်ထင်) တို့ပါဝင်သည် ။
မူရင်းစာအုပ် မောင်ကြည်သန့် - အငြင်းပွား အမှတ်လွဲ လူသိနည်း မြန်မာ့ဖြစ်ရပ်(၁၀၀)
သခင်ထိန်ဝင်း (သို့မဟုတ်) ဘဘဦးထိန်ဝင်း သို့မဟုတ်
သာသနာစိတ်ဖြင့် နိုင်ငံရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ
သခင်ထိန်ဝင်းကို ဘဘကြီး၊ မေမေကြီးတို့နှင့် အလွန်ချစ်ခင်သော မိတ်ဆွေ၊ ရဲဘော်ရဲဘက်တဦးအဖြစ် စတင် သတိထားမိရသည်မှာ ကျွန်မ ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းဟုပဲ ခေါ်ပါသည်။ ဖေဖေနှင့် မေမေတို့ကလည်း ဘဘ ဦးထိန်ဝင်း သို့မဟုတ် တခါတရံ ဦးလေး ဦးထိန်ဝင်းဟု ခေါ်တတ်ပါသည်။
ဘဘကြီးတို့၊ မေမေကြီးတို့ကို အလွန်သံယောဇဉ်ကြီးကာ ချစ်ခင်လှသူတဦးအဖြစ် မြင်ရတွေ့ရသည်မှာ အံ့သြစရာ မဟုတ်ပါပေ။ သူတို့ခေတ်၊ သူတို့အခါမှာ အဲသည်လို မိတ်ဆွေရောင်းရင်း မောင်နှမရင်းချာထက်ပင် ချစ်ခင်သော သွေးသောက်တွေ များစွာရှိပါသည်။ အခုလိုခေတ်ထဲမှာ သည်လိုချစ်ခင်လှသော မိတ်ဆွေကောင်းမျိုးဆိုတာ ရှားပါးပါဘိ။ တကယ့်ကို အားကျလောက်စဖွယ် ကြည်နူးစဖွယ်ဖြစ်ရပါသည်။
ဘဘကြီးနှင့် မေမေကြီးတို့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်မှာ ဘဘကြီး၊ မေမေကြီးတို့ကို အလွန်ချစ်ခင်လှသော ဘဘ ဦးထိန်ဝင်း ဘဝတပါးသို့ ပြောင်းသွားခဲ့လေပြီ။ ကွယ်လွန်ချိန် အသက် ၉၈ နှစ်မို့ ဘဝကို အားပါးတရ ဖြတ်သန်းခဲ့လေပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသော်လည်း အသက်ရှိလျက်နှင့် သည်လောကထဲမှာ ရှိနေစေချင်၊ နေစေချင်ပါသေးသည်။
ဘဘကြီး၊ မေမေကြီးတို့ အထူးချစ်ခင်လှသော မိတ်ဆွေရင်းချာသာမက နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာပင် အတူတွဲဖက် လှုပ်ရှားခဲ့လေသူတဦးဖြစ်ကာ မေမေကြီးကို “မမမြ၊ မမမြ” နှင့် ရင်းနှီးစွာခေါ်ကာ စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ကာ ပြောတတ်သူ တဦးအဖြစ် မြင်ယောင်မိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အသံသြသြ၊ အရပ်မြင့်မြင့်၊ ထွားထွားကျိုင်းကျိုင်း၊ အသားဖြူဖြူ တောင့်တောင့်တင်းတင်းနှင့် သည်ဘဘကို ကျွန်မ သိပ်ကိုမှတ်မိခဲ့တာပေါ့။ ပင်နီတိုက်ပုံ သို့မဟုတ် အဖြူရောင်တိုက်ပုံကို ဝတ်ဆင်တတ်ပါသည်။ မေမေကြီးတို့က “သခင်ကြီး” ဟု ခေါ်ပါသည်။
ခြံပေါက်ဝကနေ “မမမြ၊ ကိုခင်မောင်လတ်” ဟုခေါ်ကာ လူမရောက်ခင် အသံကရောက်နှင့်တတ်သူ၊ ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းဟေ့ ဟု ဆိုလိုက်တာနှင့် အိမ်က ဘကြီးတို့ မေမေကြီးတို့တတွေ ဝမ်းသာအားရ ပြေးကြိုကြကာ စကားဖောင်ဖွဲ့မပြီး၊ သူတို့ ပြောဆိုနေကြတာတွေ တခါတရံ နားမလည်။ ဘဘကြီးတို့ကလည်း ဘဘဦးထိန်ဝင်းတို့အိမ် မသွားဘဲမနေနိုင်။ အဲသည်လို ချစ်ခင်ကြသော မိတ်ဆွေအဖြစ်ဟာ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တိုင်း ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ တကယ်ပဲ အားကျမိပါသည်။
ဘဘ ဦးထ်ိန်ဝင်း၏ မြေးတဦးဖြစ်သော မအေးချမ်းကို ညီမတဦးလို ချစ်ခင်ခဲ့ပါသည်။ သည်ညီမလေးက သူ့အဘိုးအကြောင်းတွေကို အားပါးတရ ရေးတုန်းက ဘဘကြီး၊ မေမေကြီးတို့အကြောင်းတွေကိုပါ ထည့်ရေးခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က သြော် … ငါတို့ အဘိုးအဘွားတွေက တကယ်လည်း မေတ္တာဓာတ်အပြည့်ဖြင့် ဆုံးမသြဝါဒတွေ ဆိုခဲ့သည်ပဲဟု ကျေနပ်ခဲ့မိရသည်ပေါ့။
ယခုတော့ သည်ညီမလေးရေးသော စာတွေကို ပြန်ရှာပြန်ဖတ်ကာ ဘဘ ဦးထိန်ဝင်း အကြောင်းတွေကို ပြန်ပြောချင်ပါသည်။ အမှတ်တရ ပြန်လည်ဖော်မိရင်းနှင့် စာဖတ်သူများလည်း သူ ရေးသောစာတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းရမည်ပင်။ (အတွေးအမြင်၊ အမှတ်၂၀၈ တုန်းက “ကျွန်မနှင့် စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်”၊ အမှတ်၂၁၆ တုန်းက “အနှိုင်းမဲ့ ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်ခဲ့သူ နှစ်ဦး” သူ့ကလောင်အမည်က မအေးချမ်း (မြန်မာစာ)ပါ။)
အဲသည်ထဲက ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းအကြောင်းတွေ ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ရပါသည်။ အောက်က အချက်များမှာ မအေးချမ်း (မြန်မာစာ) ရေးသားထားသည်များကို ကောက်နှုတ်တင်ပြချက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ပို၍အသေးစိတ် သိလိုပါလျှင် အတွေးအမြင် မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ပြန်လည်ဖတ်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
၁။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ယူနီယမ်ဂျက်အလံနှင့် ၁၉၃၅ မှာ ဗြိတိသျှပြဋ္ဌာန်းတဲ့ အုပ်ချူပ်ရေး ဥပဒေစာအုပ်ကို မီးရှို့ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းအထောက်အထား အခိုင်အမာရှိခဲ့သည်။ ထို ဆန့်ကျင်မီးရှို့ပွဲတွင် ဦးနု (ဝန်ကြီးချုပ်)၊ ဦးလှဖေ (ဗိုလ်လင်္ကျာ)၊ ဦးထွန်းအုံ၊ ဦးထွန်းအေးတို့နှင့်အတူ သခင်ထိန်ဝင်းနှင့် ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်(မခင်မြ) တို့ ပါခဲ့သည်။ ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းက ယခုလို မကြာခဏဆိုခဲ့ကြောင်း ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“အဲဒီတုန်းက တောင်းပန်လို့လည်း မရဘူး။ မခင်မြတယောက်က စမူဆာပုံစံအင်္ကျီ ဖိုးရိုးဖားရားကြီးဝတ်လို့ ယောက်ျားတွေကြားထဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့လိုက်တော့တာပဲ။ လူစွမ်းကောင်းမကြီးလေ”
(စမူဆာအင်္ကျီဆိုသည်မှာ ရင်ဖုံးအင်္ကျီပင်ဖြစ်ကာ ရှေ့တွင် အချွန်ပုံသဏ္ဍာန် ချုပ်ထားသည်။)
၂။ ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းသည် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာစိတ်နဲ့ ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ခြင်းသည် ပိုမုိခိုင်မာပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတယ်ဆိုသည့်သဘောကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ခဲ့သူ ဖြစ်၍ အင်္ဂလိပ်ခေတ် ဂျပန်ခေတ်တလျောက်လုံး နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် သာသနာစိတ်နှင့်ပဲ တိုက်ပွဲဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦးဖြစ်သည်။
၃။ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းကြီးပွားအောင် ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်း လမ်းစဉ်များနှင့် လက်တွေ့ကျကျ တည်ဆောက်နိုင်မှသာ အောင်မြင်နိုင်ပုံကို သိမြင်စေနိုင်ဖို့ ကိုယ့်လူမျိုးတရပ်လုံးအတွက် ကိုယ်ကျင့်ဗုဒ္ဓဝင်ကောင်း တအုပ် ပေါ်ထွန်းဖို့ စိတ်ဆန္ဒဖြင့် မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်၊ သပြေကန်ဆရာတော်၊ တောင်မြို့ဆရာတော်၊ မဟာစည်ဆရာတော် တို့ထံ အဆင့်ဆင့် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ သို့သော် မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်မှာ ဒကာ ဦးထိန်ဝင်း၏ ဆန္ဒကိုဖြည့်ဖို့ အားထုတ်ဆဲ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ပေါင်းများစွာ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးသောဆန္ဒကို အားထုတ်ချင်ခဲ့ပြီး သူ့အသက် ၈၀ ပြည့်နှစ်မှာ နိုးဆော်စာတစောင် ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
“လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် မည်သူမဆို မိမိတိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး၊ သာသနာအတွက် ကူညီတော်မူကြစေလိုပါသည်။ ဤစာမူကို ကျွန်တော်တို့ အပိုင်ရယူလိုခြင်း မရှိပါ။ စာရေးသူအား ပူဇော်ရန်သာ ရည်ရွယ်ရင်းရှိပါသည်။ မိမိ ရေးသားထားသော စာမူကို မိမိသဘောကျ စီမံရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သဘောထားအသေးစိတ်ကို ဆွေးနွေးရန်အလိုရှိပါက မည်သူမဆို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါမည်အကြောင်း လေးမြတ်စွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ပိဋိကတ် တတ်မြောက်သော ပညာရှင်မဟုတ်သော်လည်း ဖြစ်မြောက်လိုသော ဗုဒ္ဓဝင်အတွက် ပညာရှိများ လက်ခံနိုင်အောင် ဆွေးနွေးတင်ပြပါမည်။”
၄။ (ထိုကာလမှတိုင် ၁၉၉၃ ခုနှစ်ထိ ကြိုးပမ်းမူများ၊ ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်မူများကား အံ့မခန်းဖြစ်ပါသည်။ အချုပ်ဆိုရသော် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထို ကိုယ်ကျင့်ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းစာ အပြီးသတ်ခဲ့သည်။)
ကိုယ်ကျင့်ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းစာသည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ရေးသားသူ ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင်မှာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အသည်းရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကြိုးပမ်းအားထုတ်သူ ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းမှာ ယခု အသက် ၉၈ နှစ်ရှိပြီး (ယခု ဤဆောင်းပါးရေးစဉ်တွင်) အသက်ထင်ရှားရှိနေဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓကို ပူဇော်ခဲ့သူ ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး၏ ကိုယ်ကျင့်ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းမှာ တနှစ်အတွင်း လေးကြိမ်တိတိ ပြန်လည် ရိုက်နှိပ်ခဲ့ရသည်အထိ ကြီးကျယ်စွာ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ထို လေးကြိမ်စလုံးကို ပါရမီစာပေမှ ထွက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုနောက်ပိုင်း အခြား စာပေတိုက်အချို့မှ ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်သောစာအုပ်တွင် ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင်၏နိဒါန်း မပါရှိကြောင်း ရေးသားထားသည်။ (ထိုနိဒါန်းကို အတွေးအမြင် အမှတ်၂၁၆ တွင် ပါရှိသည်။)
၅။ ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းသည် “ဗုဒ္ဓလောကသားတို့၏ အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင် (ကိုယ်ကျင့်ဗုဒ္ဓဝင်)ကျမ်းစာ”ကို ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများ သိစေချင်သောဆန္ဒကြောင့် ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင် ရေးသားပြီး စာမူများကို ဆရာကြီး ဦးလှမောင်အား ဘာသာပြန်ဆို ပူဇော်စေခဲ့ပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် စာမူများကို ဆရာ ဦးခင်မောင်လတ်ကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုပေးဖို့ တောင်းပန်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်စာမူကိုပါ ပူးတွဲဖြန့်ချိပေးခဲ့ပါသည်။
၆။ စာကောင်း ပေကောင်းတခု ထွက်ပေါ်လာစေဖို့ ပုံဖော်ရေးသားသူနှင့် အားထုတ်ကြိုးပမ်းသူ နှစ်ဦးစလုံး တန်ဖိုးထားသင့်သူများ ဖြစ်ပေသည်။ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို အသွင်သဏ္ဍာန်နှင့် အနှစ်သာရ တထပ်တည်းကျအောင် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသူ ထိုနှစ်ဦးကို လေးစားကြည်ညိုလာမိရပါသည်။
ဤကား ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းအား အမှတ်တရ လွမ်းမောဖွယ် ရေးသားချက်များအဖြစ် ပြန်လည်တင်ပြရင်းဖြင့် ဘဘ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေဟု ဆုတောင်းမေတ္တာဖြင့် … …။
(ဓာတ်ပုံမှာ - ၁၉၃၇ ခုနှစ်၊ တိုးတက်ရေးမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပုံ။ နောက်- ဦးထိန်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်၊ ဦးထွန်းခင်။ ရှေ့တွင်ထိုင်နေသူများ - ဦးထွန်းသန်း၊ ဦးဘရင်)
ဂျူနီယာဝင်း ဘလော့ဂ် http://juniorwin.blogspot.com/ က ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
ဘဘ ဦးထိန်ဝင်း - သခင်ထိန်ဝင်း (၁၉၁၂ - ၂၀၁၀)၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
ဈာပနမှတ်တမ်းမှ ကူးယူတင်ပြပါသည် - မိုးမခ
ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၀
သာသနာ့ ဒါယကာကြီး ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းကို သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၄၅၆ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၇၄ တော်သလင်း လဆန်း ၄ ရက် စနေနေ့ ၁၄-၉-၁၉၁၂ ညဉ့် ၇ နာရီခွဲတွင် မြောင်းမြမြို့ခရိုင် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် ကျိူက်ပိရွာတဖက်ကမ်းရှိ သောင်တန်းကျေးရွာ၌ ဖွားမြင်သည်။
မိဘများမှာ အဖ မြေတိုင်းစာရေးကြီး ဦးကျော်ဟန် အမိ ဒေါ်မေသန်းဖြစ်ပြီး မွေးချင်း ၅ ယောက်အနက် အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ၇ တန်းအထိ ပညာသင်ခဲ့သည်။
ပဉ္စမတန်းစာမေးပွဲမဖြေဆိုရသေးမီ လပွတ္တာမြို့သို့ ဖခင်ပြောင်းရွေ့ရသဖြင့် လပွတ္တာမြို့ မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွင် စာပေများဆက်လက်သင်ကြားရင်း လပွတ္တာမြို့တွင် တကြိမ်တခါမျှ မထူထောင်ဖူးသေးသော ‘သုသုဗောဓက’ စာဖတ်အသင်းကို ကူလီအခစားလုပ်၍ ကြိုးစားထူထောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် လပွတ္တာမြို့၌ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်း တခုကိုလည်း ဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် လပွတ္တာမြို့နယ် ကံဘက်ရွာ၌လည်း ‘ကုသလဝသီ’ စာဖတ်အသင်းကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသူများနှင့် အသိမိတ်ဆွေမရှိသော ဧည့်သည်များ၏ နာရေးကိစ္စများကို တွင်းတူးမြေမြုပ်သည်အထိ ကူညီခဲ့သည်။
၁၉၃၄ တွင် ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဆရာဒဂုန်နတ်ရှင်၏ ကူညီမူဖြင့် ဦးဗဂျီငို စတင်တည်ထောင်ထုတ်ဝေသော တိုးတက်ရေး မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ တွင် ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်းကို ရိုက်နှိပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရား၏ အမေးအဖြေစာအုပ်များလည်း ရိုက်နှိပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် လောကုတ္တရာအတွက် ထူးခြားသော အတွေ့အကြုံများရရှိခဲ့သည်။
၁၉၅၄ တွင် ကုသလဝသီ စာပုံနှိပ်တိုက်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ ပြည့်မှစ၍ ၁၉၆၃ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရိုက်ကူးဖြန့်ချိပြီးသော ကျမ်းစာများမှာ -
၁။ စွန်းလွန်းဆရာတော် အမေးအဖြေ ၁၃၁၁ (၁၉၄၉ ပထမအကြိမ်၊ ၎င်းနောက် အကြိမ်ကြိမ်ရိုက်နှိပ်လှူဒါန်းခဲ့)
၂။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသဆရာတော်၏ ဗြဟ္မလသုတ် မြန်မာပြန်
၃။ ပိဠိကတ်တော်သင်ရိုးအုပ်၂၀ ကို သန့်ရှင်းအောင် တည်းဖြတ်သုတ်သင်ပြီး သင်္ဂါယနာတင်အဖွဲ့သို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနုမှတဆင့် လှူဒါန်းခဲ့
၄။ ပိဠိကတ်တော်များကို ဆရာဦးအောင်မိုး အကူအညီဖြင့် မြန်မာပြန်ဆိုခဲ့ရာ ဒိဃနိကာယ်၊ မဇ္စိုမနိကာယ်အထိပြီး
၆။ မဟာဂန္ခာရုံဆရာတော်၏ သဂြိုလ်ဘာသာဌီကာ
၈။ သမညဖလသုတ် မြန်မာပြန်
၉။ ဟိတောပဒေသ ပုံပြင်
၁၀။ ဇနီးမောင်နှံ ရာသက်ပန်
၁၃။ ကလေး ဗုဒ္ဓဝင်
၁၆။ မြန်မာ့မျက်ပွင့် ရွာဓလေ့ လူ့ဓလေ့
၁၈။ ရုပ်စုံ ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်
၂၅။ ဗုဒ္ဓနည်းဖြင့်ထူထောင်ကြစို့ စာတမ်းများ
၂၇။ ယောကီပါရဂူကျမ်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
၁၉၅၈-၅၉ တွင် တိုင်းပြည်နှင့် သာသနာတော်အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အထူးသဖြင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားသဖြင့် အောင်မြင်ရန် ဝင်ရောက်ကူညီရင်း “တိုင်းပြည်ကို ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏အဆုံးအမဖြင့် ထူထောင်ခြင်းသာလျှင် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း” စာရွက်စာတမ်းများ ရိုက်နှိပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာတည်ရှိနေခြင်းအတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး ရှေးဆရာတော် သံဃာတော် များနှင့် ပုဂံခေတ် ရှင်အရဟံ အနော်ရထာ စသည် တိုင်းပြည်အတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို စနစ်တကျ ထူထောင်ပေးသွား ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို အထူးကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိသည်။ (ဆဌသင်္ဂါရတနာတင် စတင်ကျင်းပစဉ်က ဝိုင်အမ်ဘီအေ အမည်ဖြင့် ဓမ္မဝိနယပြန်တန်း ရိုက်နှိပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။)
၁၉၆၀ (၁၂-၃-၆၀) စနေနေ့တွင် မနောမယိဒ္ဓိပညာကို လက်ခံယူခဲ့သည်။၁၉၆၁ (၁၉-၈-၆၁) တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဝိုင်အမ်ဘီအေအသင်းတိုက်၌ မနောမယိဒ္ဓိပညာပြပွဲကြီး ကျင်းပခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ကျုံမငေးမြို့ အထက်ပိုင်း စေတီတော်ကို ထီးတင်ခြင်း၊ ဘုရားကြီးတိုက်အတွင်း မိဘများ၏ သိမ်ကို ဘုရားနှင့်တကွ အဆောက်အဦပါ ပြုပြင်လှူဒါန်းသည်။ ၅-၇-၆၃ တွင် ယောကီပါရကူကျမ်းကို ရိုက်နှိပ်လှူဒါန်းသည်။ မနောမယိဒ္ဓိကြေးမုံအမည်ဖြင့် စာတအုပ် ရေးသားနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂-၆၃ တွင် ရွှေကျင်ဂိုဏ်း ဒသမအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအမီ ရွှေကျင်နိကာယသာသနာဝင် ကျမ်းစာကြီးကို ရွှေဟင်္သာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကောင်းမူဖြင့် ရိုက်နှိပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ တွင် ရန်ကုန် ၁၀၇ စိန်ဂျွန်းလမ်းနေအိမ်၌ တော်လှန်ရေးအစိုးရ၏ အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
၁၉၆၄-၆၅-၆၆-၆၇ ခု၊ အောက်တိုဘာလအထိ ၄ နှစ်မျှ ထောင်အတွင်းနေခဲ့ရသဖြင့် ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ သာသနာ တော်၏တန်ဖိုးကို ပိုမိုနားလည်သိရှိကာ ကံ ကံ၏ အကျိုးကို ပိုမိုသဘောပေါက်လာခဲ့သည်။
“ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်ခြင်းသာလျှင် အချမ်းသာဆုံးလူမျိုး၊ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတော်ဖြစ်နိုင်မည်။ ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို စနစ်ကျကျ နားလည်ကျင့်သုံးလျှင် မုချတကမ္ဘာလုံးတွင် ချမ်းသာစွာ ရှိလိမ့်မည်ဟု ပိုမိုခိုင်မြဲစွာ ယုံကြည်လာခဲ့ပါသည်။”
၁၉၇၃ တွင် အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်အား ပဌာန်းတရားတော်ဟောကြားပေးရန် လျှောက်ထားခဲ့ရာ ၁၇ ရက်တိတိ ပဌာန်းတရား တော်ဟောကြားပေးတော်မူခဲ့သဖြင့် သာသနာတော်အတွက် အလွန်ကြီးကျယ်သော ကျေးဇူးတခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ တွင် သရိုက်ရွာဘုရားနှင့် ရဟန္တာသိမ်ကို ပြုပြင်ရန် ဆရာတော်နှင့် တိုင်ပင်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ကျုံမငေး အိမ်ကို ရောင်းချကာ ပြုပြင်ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁၉၈၀ တွင် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ တွင် တစ်ဘဝသာသနာ အမည်ဖြင့် တောင်မြို့ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်၏ သာသနာပြုပုံ အပြည့်အစုံ ပါဝင် သောကျမ်းစာအုပ်ကြီးကို စိတ်တိုင်းကျ ပြီးစီးထုတ် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
၂၃-၉-၈၅ (၁၃၄၇ တောင်သလင်းလဆန်း ၉ ရက်) တနင်္လာနေ့တွင် သာသနာ့ဝန်ဆောင် ကျောင်းတိုက် တည်ထောင်ရန် မြေ စတင်ဝယ်သည်။ ၂၃-၅-၈၆ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့တွင် သာသနာ့ဝန်ဆောင် ကျောင်းတိုက် ဖွင့်လှစ်သည်။
၁၉၈၈ တွင် မင်္ဂလာဗျူဟာအသင်းတိုက်၌ သမဏကျော် စာတော်ပြန်ပွဲအတွက် သြဝါဒခံယူကျင်းပပြီး ၉-၁၂-၈၈ တွင် စာဆိုတော်နေ့တွင် မဟာဗျူဟာ သာမဏေကျော်စာတော်ပြန်ပွဲကို ကမ္ဘာအေး မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၌ စတင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။
၉-၂-၉၀၊ ၁၃၅၁ တပို့တွဲလပြည့် မနောမယိဒ္ဓိပညာ စတင်တည်ထောင်သူ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး၏ အသက် နှစ် ၁၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပုဂံတွင် မနောမယိဒ္ဓိ ဓမ္မာရုံတခု ဖြစ်မြောက်အောင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်၏ ဗုဒ္ဓ (သို့) အနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးရှင် ကျမ်းစာကို တနှစ်တည်း ၄ ကြိမ်တိုင်တိုင် ရိုက်နှိပ်ပြီးစီး အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းသည် သာသနာတော် သန့်ရှင်းတည်တံ့ပြန့်ပွားရေးကိစ္စများကို တစိုက်မက်မက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
(ဘဘ ဦးထိန်ဝင်းသည် ၂၀-၅-၂၀၁၀ ကြာသပတေး ည ၁၀:၃၀ တွင် ရန်ကုန်မြို့ Asia Royal ဆေးခန်းတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်)
ဘဘ ဦးထိန်ဝင်း၏ ဆုံးမခဲ့သော စကားများ … …
အားလုံး စကားကိုရှင်းအောင်ပြောကြ၊ စည်းစည်းလုံးလုံးနေ။
သရဏဂုံကို အသက်နှင့် ထပ်တူဆောက်တည်ပါ။
တစတစ စွန့်ဝံ့မှသာလျှင် ဘဝနှောင်းနှောင်း ဆက်တိုင်းကောင်း၏
သခင်အောင်ဆန်းကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သူ ရာဇဝတ်ဝန် မစ္စတာဇေးဗီးယား
၁၉၄ဝ ပြည့်နှစ်က ဒေါင့်ကြီး (ဇလွန်မြို့နယ်)မှာ တားမြစ်ထားတဲ့ ချင်းတောင်တန်းကိစ္စ ဟောပြောမှု နဲ့ ဆုငွေ ငါးကျပ်ချီးမြှင့်မယ့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သူ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ရာဇဝတ်ဝန် မစ္စတာဇေးဗီးယား D.W Harison Xavier ကိစ္စကို အများသိကြပေမယ့် အသေးစိတ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေ ရှိသေးလို့ ရေးပြပါဦးမယ်။
ကိုလိုနီခေတ်၊ စစ်ကြိုခေတ်၊ စစ်ပြီးခေတ်တစ်ဝိုက်က ဟင်္သာတ ခရိုင်မှာ နိုင်ငံရေးအရ နိုးကြားတက် ကြွသူတွေရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေး သမားတွေလည်း ထွက်ခဲ့တယ်။ တို့ဗမာ အစည်း အရုံးကြီးကို ထူထောင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ တစ်ဦး အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ဝန်ကြီးဟောင်း သခင်ဗစိန် (နောင် ဗမာပြည် ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီ)၊ ဝန်ကြီးမန်းဘခိုင် (နောင်-အာဇာနည်)၊ ဖဆပလ ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးသန်းတင်၊ ဝန်ကြီး ဟင်္သာတဦးမြ၊ ဝန်ကြီး သခင်ချစ်မောင် (မြန်အောင်)၊ ဝန်ကြီးစောအောင်ပ၊ အလံနီ ဗိုလ် အောင်မင်း အစရှိသည်တို့ဟာ ဟင်္သာတခရိုင်မှာမွေးဖွားကြတယ်။ တချို့လည်း ဟင်္သာတမှာ ကျောင်း နေပြီး နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကို အခြေ ချသူတွေဖြစ်တယ်။
အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရက လည်း ဟင်္သာတခရိုင်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဗျူရိုက ရက်အရာရှိဆိုးတွေထဲက အရက် စက်ဆုံး၊ အကြမ်းတမ်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် တွေကိုမှ ရွေးချယ်ပြီး ဟင်္သာတ အရေးပိုင် (D.C) ၊ ခရိုင်ရာဇဝတ်ဝန်(D.S.P) အနေနဲ့ ပို့လွှတ်တာဖြစ် တယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ရာဇဝတ် ဝန် မစ္စတာဇေးဗီးယား ဘယ် လောက်ဆိုးသလဲဆိုရင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ (အငြိမ်းစား) ဒေါက်တာ ဘဦးရဲ့အဆိုအရ -မြန်မာနိုင်ငံဖွား အင်္ဂလိပ်- ကုလား ကပြားပုလိပ်အရာရှိ ဇေး ဗီးယားဆိုသူဟာ ရက်စက်ကြမ်း တမ်းသူဖြစ်တယ်။ သူ့ဇာတိမော်လ မြိုင်မှာ ခြံစိုက်ပျိုးသူဘဝနဲ့ လူသတ် မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ခြံ အလုပ်သမားကို ကြိုးနဲ့တုတ်ပြီး ပျားရည် တွေလိမ်းကျံကာ ခြတောင် ပို့နားမှာထားပြီး ခြစာကျွေး ညှင်း ပမ်းသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ အောက်ရုံးအ ဆင့်ဆင့်ကတစ်ဆင့် တရားရုံးချုပ် ရောက်လာတယ်။
ဥရောပခုံသမာဓိအဖွဲ့နဲ့ တရားစီရင် ရာ အမှုက ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွား ပြီး မကြာခင် ရန်ကုန်ပုလိပ်အဖွဲ့မှာ အင်စပက်တော်ဖြစ်သွားတယ်။ရာဇဝတ်မှုစုံထောက် ရာမှာ ဇေးဗီးယားနာမည်ရလာတယ်။ ရန် ကုန်မြစ်တွင်း ဆန်ခိုးဂိုဏ်းကို မိ တယ်။ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်လို့ယူဆ ရသူအိမ်ကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ ငွေ ကျပ် ၁ သိန်းတွေ့ရှိတယ်။ အမှုကို ရုံးတင်တော့ ငွေ ၁ သိန်း ကို သက်သေခံမတင်ပြဘူး။ အမှု စစ်ဆေးစဉ် သုံးပစ်လိုက်ပြီလို့လည်း ဆိုတယ်။ ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းအရေး ယူခံရမယ်ထင်ပေမယ့် ဘာမျှမဖြစ် ပါ။ ရာထူး တောင်တက်သွားတယ်။ ဂဠုန် ဦးစောနန်းရင်းဝန်ဘဝက တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင် သခင်များ ကို နှိပ်ကွပ်ရာ လက်သံပြောင်ခဲ့လို့ မစ္စတာဇေးဗီးယားကို ရမည်းသင်း ရာဇဝတ်ဝန် (D.S.P) အဆင့်တိုး ပေးခဲ့တယ်။ ၁၉၄ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ဟင်္သာတခရိုင် ရာဇဝတ်ဝန်ရာထူးနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာရင်း သခင်အောင်ဆန်းတို့ ဇလွန်တရားပွဲနဲ့ ထိပ် တိုက်တိုးတော့တာပဲ။
တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီးရဲ့ နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဖရင့်တွေကို ခရိုင် မြို့ကြီးတွေမှာ အလှည့်ကျ ကျင်းပ လေ့ရှိတယ်။ ဌာနချုပ်အမှုဆောင် တွေကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရင်း အဆင်မပြေတာတွေလည်း သမိုင်း မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ (ဆရာကြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းက ကွန်ဖရင့်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ညီလာခံလို့ခေါ်ဆိုရန် ပြင်ဆင်ပေးလို့ နောင်အခါ ညီလာ ခံတွေလို့ပဲ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ တယ်။) ဟင်္သာတခရိုင်ကတော့ ထူးထူးခြားခြားခရိုင်အဆင့် ကွန် ဖရင့်လုပ်တဲ့အခါ ဌာနချုပ်က အထွေ ထွေ အတွင်းရေးမှူး မိန့် ကြားချက်ကိုနာယူဖို့ သခင် အောင်ဆန်းကို ဖိတ်ကြားတယ်။ တစ်ဆက်တည်း ဇလွန်ပရိသတ်က လည်း သခင်အောင်ဆန်းကို ဇလွန် မြို့နယ် ဒေါင့်ကြီးရွာတရားပွဲမှာ ဟောပြောပြီးမှ သင်္ဘောနဲ့ ရန်ကုန် ကို ခရီးဆက်ဖို့ စီစဉ်ထားကြတယ်။
ဟင်္သာတသင်္ဘောဆိပ်ကနေ ဈေးကြီးကိုဖြတ်လာပြီးမှ သခင် အောင်ဆန်းဟာ ဈေးထောင့်နားက တည်းခိုရမယ့် သခင်စိန်ဦး အိမ်ကို ရောက်တယ်။ လမ်းတစ်လျှောက် ဆေးရွက်ကြီးတွေ လမ်းပေါ်မှာ နေ လှမ်းထားတာမြင်ရလို့ သခင် အောင်ဆန်း စိတ်မသက်မသာဖြစ် ခဲ့ရတယ်။ သခင်စိန်ဦးအိမ်နဲ့ စာ ရေးသူရဲ့ အဘိုးအဘွားများအိမ်က သိပ်မကွာဝေးပါ။ သခင်အောင်ဆန်း ရောက်ရင် ဈေးသူဈေးသားတွေက သတိပြုမိကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မနှစ်သက်သူဖြစ်နေတော့ အမှတ်တမဲ့နေကြရတယ်လို့ အဘွား လုပ်သူက ကျွန်တော်တို့ကို ပြောခဲ့ ပါတယ်။ အဘွားကလည်း ဆေး လိပ်ခုံထောင်ဖူးတယ်။ ၁၃-၇-၄၇ နေ့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းမှာ ဟင်္သာတက ဆေးရွက်ကြီးလှမ်းသူတွေကို အပြစ်တင်တော့ တို့လည်းပါတာ ပေါ့လို့ အဘွားမသေခင်က ပြော ဖူးတယ်။ (အဲဒီဈေးကြီးနဲ့ သခင် စိန်ဦးအိမ်၊ ကျွန်တော့် ဘိုးဘွားများ အိမ်တွေ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းတိုက် စားခံရလို့ မရှိတော့ပါဘူး။ ယခု ရှုခင်းဧရာတည်းခိုရိပ်သာ နေရာ သာကျန်ပါတော့တယ်။) ဂျပန် ခေတ်ဦးကာလ စစ်ဝန်ကြီးဘဝနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းဟာ ပုသိမ်နဲ့ ဟင်္သာတကို ရောက်လာသေးတယ်။
ဟင်္သာတကနေ ဇလွန်မြို့က တစ်ဆင့် ဒေါင့်ကြီးရွာတရားပွဲကို သခင်အောင်ဆန်းကူးသွားတော့ ညဘက်ဟောပြောရမှာဖြစ်တယ်။ သာယာဝတီ၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ် တွေကလယ်သမား၂ဝဝဝကိုလည်း ဝိဓူရသခင်ချစ်မောင်က ဦးဆောင် ပြီးလှည်းတတန်၊ လှေ တတန်နဲ့ သခင်အောင်ဆန်းရဲ့ မိန့်ကြားချက် ကိုနာယူဖို့ ရောက် နေကြပါပြီ။ တရားဟောနေတုန်း ပုလိပ် စုံ ထောက်တစ်ယောက်က ရာဇဝန်ဝန် ဇေးဗီးယားထံမှ စာတစ်စောင် လာ ပေးတယ်။
ချင်းတောင်ကိစ္စကို သခင်အောင်ဆန်း ထည့်သွင်း မပြောပါနဲ့လို့ တားမြစ်တဲ့စာဖြစ် တယ်။ အကယ်၍ ဟောရင်လည်း တရားပွဲအပြီး ဖမ်းဆီးဖို့ ဖမ်းဝရမ်း တစ်စောင်ပါ ပုလိပ်စုံထောက်တွေ လက်ထဲမှာ ရှိတယ်လို့ အဆိုရှိတယ်။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ချင်းအမျိုးသားများထကြွမှုမှာ နယ်ချဲ့ တွေက နှိမ်နင်းလို့ လူ ၁ဝဝ ခန့် သေကျေခဲ့တဲ့သတင်းကို ပြည်မက မသိအောင် အင်္ဂလိပ်က ထိန်ချန်ထားတယ်။ မျက်စိကြီး၊ နားကြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေက သိတာပေါ့။ သခင်အောင်ဆန်းကလည်း ချင်းတောင်ကိစ္စပြောဖို့ သတိမေ့နေတာ အခု စာရောက်လာမှ သတိရပြီး ဟောရဦးမယ်ဆိုပြီး ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ဟောတော့တာ ပဲ။
ဒေါင့်ကြီးတရားပွဲပြီးတော့ လူ တွေသိပ်များနေလို့ ပုလိပ်တွေက မဖမ်းရဲပါ။ သခင်အောင်ဆန်းကို လိုက်ပို့သူများကလည်း ဒေါင့်ကြီး သင်္ဘောဆိပ်ကနေ ရန်ကုန်ဘက် သွားမယ့်သင်္ဘောကို မစီးစေဘဲ ဟင်္သာတဘက်ကို ဆန်တက်မယ့် သင်္ဘောကို စီးခိုင်းတယ်။ ဌာနချုပ် က အဖော်တွေလည်းပါတယ်။ ပုလိပ်တွေက ဟင်္သာတသင်္ဘော ဆိပ်မှာ ဖမ်းဖို့ စောင့်နေကြတယ်။ ဟင်္သာတမ ရောက်ခင် သာဓု ချောင်းရွာမှာ သင်္ဘောကပ်တဲ့အခါ သခင်အောင်ဆန်းတို့ ရွာထဲဆင်းနေကြတယ်။
ပြည်မြို့က ရန်ကုန် စုန် ဆင်းလာတဲ့ သင်္ဘောက ဟင်္သာ တမြို့ဆိုက်ပြီးနောက် သာဓုချောင်း ရွာမှာကပ်တယ်။ အဲဒီသင်္ဘောနဲ့ ရန်ကုန်ဘက်စီးလာပြီး ရန်ကုန် မရောက်ခင် သင်္ဘောဆိပ်တစ်ခုမှာ ဆင်းပြီး ရန်ကုန်ရောက်လာ တယ်။ ၁၂-၇-၄ဝ နေ့ မစ္စတာ ဇေးဗီး ယားက သခင်အောင်ဆန်း ကို ဖမ်းဆီရမိအောင် သတင်းပေးနိုင် လျှင် ဆုတော်ငွေ ၅ ကျပ် ဟူ၍ နှိမ့်ချတဲ့သဘောနဲ့ ကြေညာ တာကို နိုင်ငံသိလုပ်လိုက်တယ်။
ရန်ကုန် ရောက်တော့ သခင်လှဖေ (ဗိုလ် လက်ျာ)တို့အဖွဲ့က သခင်အောင် ဆန်းကို ဝှက်ထားပြီး ၈ သြဂုတ် ၁၉၄ဝ နေ့မှာ နိုင်ငံခြား အဆက် အသွယ်ရှာဖို့ တရုတ်နိုင်ငံသွားမယ့် ဟိုင်းလီသင်္ဘောပေါ်ကို သခင်လှ မြိုင် (ဗိုလ်ရန်အောင်)နဲ့အတူ တင် လိုက်ရတယ်။ အားလုံး ၂၈ ရက် တိတိ သခင်အောင်ဆန်း ကိုယ် ယောင်ဖျောက်နေခဲ့ရတယ်။
ဂျပန်မှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်စစ် ပညာသင်အပြီး အင်္ဂလိပ်ကို တိုက် ခိုက်ဖို့ မော်လမြိုင်စစ်ကြောင်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ B.I.A တပ် မတော် ချီတက်လာတယ်။ ဂျပန် လေတပ်ကလည်း ရန်ကုန်မြို့ကို ၂ ကြိမ် ဗုံးကြဲလို့ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံနဲ့ တကွ မျက်နှာဖြူတွေ မြစ်ကြီးနား ကတစ်ဆင့် အိန္ဒိယကို စစ်ပြေးရ တယ်။ ခရိုင်ဝန်၊ ခရိုင် ရာဇဝတ်ဝန်၊ တွေကိုလည်း နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေး အ ဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကို သတ်မှတ် ထားသူတွေကို အပ်နှံပြီးမှ စစ်ဘေး က ရှောင်ရမယ်လို့ ညွှန်ကြားတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ အငြိမ်းစား ဒေါက်တာဘဦးရဲ့အဆိုအရ ဟင်္သာ တခရိုင် ရာဇဝတ်ဝန် မစ္စတာဇေးဗီး ယားဟာ နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေး သိန်း ပေါင်းများစွာကို ယူဆောင် ထွက် ပြေးခဲ့သူလို့ ဆိုပါတယ်။၁၉၄၂ ခုနှစ် စစ်ပြေးကြတော့ ဒေါက်တာဘဦးက တရားဝန်ကြီး ဘဝနဲ့ ကသာမြို့ကို စစ်ရှောင်ဖို့ ပုသိမ်မှာရှိတဲ့ မိဘတွေကို သွား ရောက် ခေါ်ဆောင်ပြီး ဟင်္သာတမြို့ ကို ရောက်လာပါတယ်။ ဟင်္သာတ ခရိုင်၊ ရာဇဝတ်ဝန် မစ္စတာဇေးဗီး ယားနဲ့တွေ့ပြီး အထက်ဆန်ဖို့ သင်္ဘောအကူအညီ တောင်း တယ်။ ဧရာဝတီဖလိုတီလာကုမ္ပဏီပိုင် သင်္ဘောတစ်စင်းကို ပေးတယ်။ သင်္ဘောဆလင်နဲ့ စက်ဆရာကို ခက်ခဲစွာရှာယူခဲ့ရတယ်။
အဲဒီ သင်္ဘောနဲ့ ဟင်္သာတက ပြည်မြို့ကို ဆန်တက်လာတော့ နောက်နားက အရေးပိုင်သင်္ဘောနဲ့ မစ္စတာဇေးဗီး ယားတို့လည်း ဆန်တက်လာတာ တွေ့မြင်ရတယ်။ လုံခြုံမှုရှိတဲ့ အရေးပိုင်သင်္ဘောနဲ့ လွှတ်တော် တရားဝန်ကြီး ဒေါက်တာဘဦးတို့ သားအဖေတွေကို တစ်ပါတည်း ခေါ်လာနိုင်ပါလျက်နဲ့ မခေါ်ခဲ့ပါ။ (သူ့သင်္ဘောမှာ အစိုးရဘဏ္ဍာငွေ တွေပါလာတာ ဒေါက်တာဘဦး သိသွားမှာ စိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။) ပြည်မြို့ ကိုရောက်တော့ အရေးပိုင် မျက်နှာဖြူကို အထက်လူကြီးတွေက ပြန် ခေါ်ပါတယ်။ မစ္စတာဇေးဗီးယားက အစိုးရငွေတွေကို သက်ဆိုင်ရာကို မအပ်နှံဘဲ အရေးပိုင်သင်္ဘောနဲ့ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွား ကြောင်း အစီရင်ခံစာအရ သိရပါ တယ်။ အိန္ဒိယပြည်ဘက်ကို ထွက် ပြေးလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အစိုးရဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးစား ပြုတယ်လို့ သင်္ကာမကင်းခံရတဲ့ အရာရှိများကို ဂျပန်ခေတ်၊ စစ်ပြီး ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးခေတ်များမှာ ဒေါက်တာဘဦး၏ အဆိုအရ အလုပ်ပြန်မခန့်တော့ဟု သိရပါတယ်။ စစ်ပြီးစ (Cas.B) ဗြိတိသျှစစ်အုပ် ချုပ်ရေးခေတ်မှာ မစ္စတာဇေးဗီးယား ဟင်္သာတခရိုင်ရာဇဝတ်ဝန်အြ့ဖစ် ပြန်ရောက် လာ ပြန်တယ်။
ကျွန်တော်၏ ဦးလေးတော်သူ ဟင်္သာတ ဗိုလ်ဖုန်းမြင့်ဟာ မျိုးချစ် ဗမာ့တပ်မတော် P.B.F တွင် အမှု ထမ်းဖူးတယ်။ အသက် ၈ဝ အတွင်းရောက်နေသော ဗိုလ်ဖုန်း မြင့်၏ အပြောအရ ခရိုင်ရာဇဝန်၏ အိမ်ကြီးကို D.S.P အဆက်ဆက်နေ ထိုင်လာခဲ့ကြတယ်။ ရာဇဝတ်ဝန် ရာထူးကို နောင်အခါ ခရိုင်ရဲဝန်၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး (ပြည်သူ့ရဲ)၊ လက်ထောက်တိုင်းတပ်ဖွဲ့မှူး (ပရ) စသဖြင့် ခေတ်အလိုက် ခေါ်ဝေါ်လာ ကြတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များ ယခု အထိ နေထိုင်ကြတဲ့အိမ်ကြီးမှာ မစ္စတာ ဇေးဗီးယား နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်ကြီးသာဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာ ဇေးဗီးယား အိမ်ဘေး(လမ်းထောင့်ကွက်လပ်) ပညာရေးရိပ်သာပိုင်မြေ နေရာမှာ P.B.F တပ်မတော်တပ်စု တစ်ခု စခန်းချနေထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။ P.B.F မျိုးချစ်ဗမာ့ တပ်မတော် သားများဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ဆုငွေ ၅ ကျပ်နဲ့ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ဇေးဗီးယားအပေါ် အမြင်မကြည်လင်ကြပါ။ ဒါကြောင့် သူ့အိမ်ဘက် ကို စက်သေနတ်ပြောင်းဝများကို ချိန်ထားပြီး ကျီစယ်ကြဖူးကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ပြောပြပါတယ်။
ဒေါက်တာဘဦးအလိုအရ စစ် ပြေးကာလ နိုင်ငံဘဏ္ဍာအလွဲသုံး စားပြုသူများဟု သင်္ကာမကင်းဖြစ် ခံရသော အရာရှိ်များ အလုပ်ပြန်မခန့်ဟုဆိုသော်လည်း ကက်စဘီ ခေတ်မှာ ခရိုင်ရာဇဝတ်ဝန် မစ္စတာဇေးဗီးယား ဟင်္သာတသို့ ပြန် ရောက်လာပြီး ရာထူးမပြုတ် အခြေ မပျက်ရှိသည်ဟု မှတ်ချက်ချရမလို ဖြစ်နေပြန်တယ်။ ဘာပဲပြောပြော အရင်တုန်းကလည်း ရာထူးမြဲခဲ့ သော (ရာထူးတွေ အဆင့်ဆင့်တက် ခဲ့သော) မစ္စတာဇေးဗီးယားမှာ ခေတ်ပြောင်းသော်လည်း (မဟုတ်တာ တွေပဲ လုပ်ခဲ့ရင်း) သူ့စည်းစိမ် မပျက်ရှိသဖြင့် အာဂဇေးဗီးယား ဟုသာ ပြောရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
‘သခင်’ ဆိုတဲ့ ဘွဲ့တစ်လုံး
‘တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင်’ ‘သခင်’ လက်ဟောင်းကြီးများမှာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြပါသေးလျှင် အတော်ကြီး သက်ရွယ်အိုမင်း ဖြစ်နေကြပါလေပြီ။ လက်ကျန်ထက် ကွန်လွန်ကပင် အဆမတန်များနေပြီဟု ဆိုကြရ ပါ တော့မည်။ တစ်ခါတရံ သတင်းစာနာရေးကြော်ငြာများတွင် သခင်ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ စသည်ဖြင့် တွေ့လိုက် ရလျှင် ဘာရယ်မဟုတ်၊ သူတို့တစ်တွေ ‘သခင်’ဟူသောဘွဲ့ကိုရနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပုံကို ရော်ရမ်းစဉ်းစား မိပြီး အံ့သြချီးကျူးခြင်းလည်း ဖြစ်မိသည်။ ပြုံးလည်း ပြုံးမိပါသည်။
စာဖတ်သူက အသက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် မျှသာ ရှိပါသေးလျှင် ‘သခင်’ဆိုတာ ဘာများထူးလို့လဲဟု သာမန်ပေါ့ပေါ့ဆဆသာ သဘောထားကောင်း ထားပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းစုံကို သိရလျှင်မူကား ကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင် ချီးကျူး အံ့သြခြင်း၊ နှစ်သက်စွာ ပြုံးမိခြင်းတို့ ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ပါသည်။
Labels: ဗမာသမိုင်း, ဆောင်းပါးများ
Posted by danyawadi on July 3, 2012 in Articles, Politic
Labels: ဗမာသမိုင်း, အတ္ထုပတ္တိ
(ဤဆောင်းပါးရှင် သခင်တင်မောင် (ကျုံးမငေး)မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဆုငွေ ၅ိ ထုတ်စဉ်က ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အတူ တရားဟောခဲ့သူ ဖြစ်သည်။)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အထွဋ်အထိပ် ရောက်လာပြီးနောက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းကို တတိုင်းပြည်လုံး သိပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ အထိဋ်အထိပ် မရောက်မီ အညတြ သခင်အောင်ဆန်းဘဝက အကြောင်းများကို သိသူ အလွန်နည်းပါးပေမည်။ သို့ကြောင့် တို့ဗမာအစည်းအရုံးခေတ် သခင်ဘဝနှင့် သခင်အောင်ဆန်း၏ မမေ့နိုင်ဘွယ်ရာ အကြောင်းကလေးများကို ရေးလိုပေသည်။
“နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကုသိုလ်တပဲငရဲတပိသာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုငယ်ငယ်ကတည်းကကြားဖူးတာပါ။ မြန်မာ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရေးတဲ့ စာမှာလည်း ဒီစကားလုံးကို တွေ့ရတော့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမိခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဒီစကားလုံး ဘယ်သူတင်သွင်းခဲ့သလဲ၊ ဘာကြောင့်လည်း၊ ပြောသူကိုယ် တကယ်ယုံကြည် ကျင့်သုံးခဲ့သလား။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် လန်ဒန်သို့ ထွက်ခွာမသွားမီ လအနည်းငယ်အလိုလောက်တွင် ကာကီဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ထားသူများက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သဖြင့် ဦးစောမျက်စေ့တွင် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသည်။ ဦးစောသည် ဤ ကိစ္စတွင် ဦးအောင်ဆန်း၏ ပြည်သူ့ရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၌ တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆကာ ကလဲ့စားချေခြင်းဖြစ် သည်ဟု အချို့ကခန့်မှန်းကြပါသည်။ သို့သော်နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ အလုပ်အမှုဆောင်ကောင်စီတခုလုံးအား သုတ်သင်ချေမှုန်းရန် ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဦးအောင်ဆန်းနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်လိုက်ခြင်းဖြင့် သူသာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာ မည်ဟူသော ထူးဆန်းသည့် ယုံကြည်ချက်ဖြင့် လုပ်ကြံမှုကြီးကို ဦးစော စီစဉ်ခဲ့ဟန်တူပါသည်။
မြန်မာပြန် - ဒေါက်တာအောင်ခင်
ကျမ မှတ်မိနိုင်သော အရွယ်မရောက်မီကပင် ကျမ၏ ဖခင် ကွယ်လွန်သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် “ဖေဖေဟာ ဘယ်လိုလူစားမျိုးပါလိမ့်” ဟူသော သိချင်စိတ်ဖြင့် ဖခင်၏ဘ၀လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သော စာပေ အထောက်အထားများကို ကျမ စတင်စုဆောင်း လေ့လာဖတ်ရှုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြပါ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာတမ်းကို ရေးသားရာ၌ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း အထောက်အထားများကို အဓိကအခြေခံထားပါသည်။ အကြောင်းအရာနှစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍သာလျှင် ကျမတို့မိသားစုနှင့် ဖေဖေ့အား ကောင်းစွာသိကျွမ်းခဲ့သူများ ထံမှ သိရှိရသောအချက်အလက်များအပေါ်တွင် အတော်အသင့် အခြေခံထားပါသည်။
သွေးသားနီးကပ်စွာ တော်စပ်သူတဦး၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုရေးရသည်မှာ မလွယ်ကူပါ။ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျရေးနိုင်မည် မဟုတ်ဟု အစွပ်စွဲခံရနိုင်ပါသည်။ တကယ်တမ်းတွင်လည်း အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးသူတို့သည် မိမိတို့ ရှာဖွေစုဆောင်းရ ရှိသော အထောက်အထားများဖြင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ဥာဏ်ကို ပုံစံသွင်းပေးခဲ့သော အဖြစ်အပျက်၊ အတွေ့အကြုံများ၏ သြဇာသက်ရောက်မှုမှ ကင်းလွတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျမအနေဖြင့် ကျမဖခင်၏ ရုပ်ပုံလွှာ ကို ကျမမြင်သည့်အတိုင်း မှန်ကန်စွာ ပေါ်လွင်စေရန် ကြိုးပမ်းရေးသားထားပါသည်ဟုသာ ပြောနိုင်ပါသည်။
သူ၏အောက်မှ လူထုကြီးသည် စည်းကမ်းသေဝပ်ခြင်း အတန်ငယ်ကင်းမဲ့စွာ နားထောင်လျက်ရှိ၏။ လူထုကြီးသည် စူးစိုက်ခြင်း မရှိ။ တချို့က ပြုံးရယ်၍နေ၏။ နောက်နားရှိ လူထုအစိပ်အပိုင်းတခုကား အချင်းချင်း ခေါင်းချင်းကပ်ကာ တီးတိုးပြောနေကြ၏။ သို့သော် ပျက်ရယ်ပြုခြင်းကားမရှိ။ လေးစားခြင်းသည် အားလုံး၌ တညီတညွတ်တည်း ရှိ၏။
အစိမ်းရောင် ကတ္တီပါကားကြီးသည် သူ့ကိုနောက်ကားခံ၍ ထား၏။ ကားလိပ်ကြီးမှာ ဘာရုပ်ပုံ တောတောင်မှ ခြယ်လှယ်ထားခြင်း မရှိ။ ပကတိ ပိန်းပြောင်ပြောင်ဖြစ်၏။ ကတ္တီပါကားသည် အခြား ဘာအဓိပ္ပာယ်ကိုမျှ ထူးထူးထွေထွေ မဖော်ပြ။ သို့သော် မှိုင်းညို့ခြင်းတခုကိုသာ ရဲဝံ့စွာဆောင်၍ နေသည်။
သူသည် စိမ်းညိုသောကားကြီး၏ ရှေ့စင်မြင့် ဇာတ်ခုံပေါ်၌ ရပ်ကာ စကားပြော၍နေသည်။ သူသည် ဗမာ ပထဝီမြေကြီးမှ ဗမာ ဝါဂွမ်းဖြင့် ရက်လုပ်သည့် ပင်နီဖျင်ကြမ်းကြီးကို ဝတ်ထား၏။ လုံချည်မှာ နီရဲသော ရွှေတောင် ပိုးလုံချည်ဖြစ်၏။ ခေါင်းမှာ ပွယောင်းယောင်းနှင့် မသေသပ်။ မျက်နှာအသွင်အပြင်မှာ အပူပိုင်းဒေသ အီကွေတာပေါ်ရှိ ကျွန်းစုများတွင် နေထိုင်သော မွန်ဂိုလီယံအနွယ် လူရိုင်းမျက်နှာနှင့် တူ၏။ သို့မဟုတ် တောင်ပေါ် ချင်းတယောက်နှင့်လည်း တူ၏။
စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၂
ငယ်စဉ်က အင်းဝမြို့ မူလတန်းကျောင်း၊ မန္တလေး အေဘီအမ် မိန်းကလေးကျောင်း၊ သကျသီဟဘုရားအနီး ဆရာငုံကျောင်းနှင့် မန္တလေးအမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းတို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရာဇ ဝင် (သမိုင်း) ဘာသာ (၃) ခုစလုံးတွင် ဂုဏ်ထူးရခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ - ၃၇ တွင် မန္တလေးဥပစာကောလိပ်၌ ပညာဆက်လက်သင်ယူသည်။ ၁၉ ၃၆ - ၃၇ အိုင်အေအထက်တန်းကို ပါဠိဂုဏ်ထူးဖြင့်အောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ခဲ့ပြီး ၁၉၃၈ - ၃၉ ဘီအေ အထက်တန်းတွင် ပညာသင်ကြားနေစဉ် ရေနံမြေသပိတ်ပေါ်ပေါက်လာရာ နိုင်ငံရေးလောကသို့ အချိန်ပြည့် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
သခင်ဘဟိန်းကို ကိုဘဟိန်း၊ ရဲဘော်ဘဟိန်း၊ သခင်ဘဟိန်းဟု အများကသိကြသည်။
ထိုအမည်နာမများကို သူ့အချိန် သူ့အခါအလျောက် သူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သူတို့က ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂစားသောက်ဆိုင်၌ တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ စုဝေး၍ စားသောက်နေကြသည်။
ထိုအထဲမှတစ်ယောက်သည် ၀ိုင်းဖွဲ့စားသောက်ရင်း စကားပြောနေကြသည့်အထဲတွင် မပါဝင်ဘဲ စီးကရက်ကို တွင်တွင်ဖွာလျက် စားပွဲစွန်းရှိဓာတ်စက်ကို ဓာတ်ပြားတစ်ချပ်ပြီးတစ်ချပ်လဲကာ ဖွင့်နေလေသည်။ ထိုသူသည် အသားဖြူဖြူ၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်၊ ဖျင်အင်္ကျီ လက်ရှည်၊ ဘန်ကောက်လုံချည် မြင်းချေးရောင် အစိမ်းကို ၀တ်ဆင်ထားသည်။
မျက်နှာမှာ ပဒုမ္မာ ကြာပန်းကဲ့သို့ လန်းရွှင်းနေသည်။ ချစ်ဖွယ်ကောင်းသော အပြုံးကလေးများသည် နီရဲသော ပါးပြင်နှင့် နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင် ထာဝစဉ် နားခိုလျက် ရှိသည်။
သန်းဝင်းလှိုင်၊ သြဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၁၂
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးသမိုင်း၌ ထင်ရှားခဲ့သော သခင်ဗစိန်ကို ၁၉၁၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် သောကြာနေ့တွင် အဖဦးဘိုးမြစ်၊ အမိဒေါ်စောတို့မှ သင်္သာတမြို့ တာသစ်ရပ်၌ ဖွားမြင်ခဲ့ သည့် အထွေးဆုံးသားဖြစ်သည်၊ သခင်ဗစိန်၏ မေးချင်း အစ်ကိုအစ်မများမှာ ဒေါ်သိန်းရင်၊ ဒေါ်အေးယု၊ ဦးသန့်၊ ဒေါ်အေးစိန် နှင့် သခင်စိန်ပြန့်တို့ဖြစ်ကြသည်။ သခင်ဗစိန်၏ဖခင်မှ မျိုးရိုးသည် ဆွေကြီးမျိုးကြီး ဂုဏ်ကြီးဒြပ်ကြီး ဟု ဆိုနိုင်လေသည်။ ဦးဘိုးမြစ်၏ ဖခင်ဦးရွှေအောင်သည် ဟင်္သာတမြို့မှ ကြွယ်ဝသော ချမ်းသာသော သမာဓိ မြို့ဝန်ဖြစ်သည်။
သခင်ဗစိန်သည် ကျောင်းနေစဉ်ကပင် အစ်ကိုဖြစ်သူက အိမ်၌သင်ကြားပေးခဲ့သဖြင့် ဟင်္သာတမြို့အစိုး ရအထက်တန်း၌ စတုတ္ထတန်းမှစ၍ အတန်းတက်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၂၈ခုနှစ်တွင် ဒဿမတန်းကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ စာ၊ သင်္ချာဘာသာရပ်တို့၌ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် နောင်တွင် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် အမျိုးသားလွတ်မြောက် ရေးတိုက်ပွဲ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည့် ကိုဗစိန်ကို နိုင်ငံရေးမျိုးစေ့ သန္ဓေတည်ပေါက်ဖွားပေးရာ ဘူမိနက် သန်မြေဖြစ်သည်။ ကိုဗစိန်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၌ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကာ ၁၉၃၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ပထမဆုံး အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည်။
ထက်မြက်သော တို့ဗမာအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်ပြည်၌ အုပ်ချုပ်ရေးပညာကိုသာ သင်ယူ၍ ဗိုလ်ဘွဲ့မခံယူခဲ့သော ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သခင်ထွန်းအုပ်သည် နောင်တွင် မိမိအခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက် လက်မောင်းသွေးဖောက်၍ သစ္စာပြုထားသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် အဆိုးရွားဆုံးသစ္စာဖောက်ပြီး နယ်ချဲ့အလိုတော်ရိဖြစ်သွားသောကြောင့် နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် တဖြည်းဖြည်းတိမ်မြှုပ်သွားခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
၀ိသုဒ္ဓါရုံဗာရာဏသီတိုက်ဟုဆိုလျင် ဒေါ်သိန်းတင်၊ ဒေါ်သိန်းတင်ဟုဆိုလျင် ၀ိသုဒ္ဓါရုံဗာရာဏသီတိုက်၊ ဤသို့ဖြင့် ဒေါ်သိန်းတင်နှင့် ၀ိသုဒ္ဓါရုံဗာရာဏသီတိုက် သည် ခွဲခြားမရဘဲ တသားတည်းဖြစ် လျက်ရှိကြောင်းကို လူအများက အသိ အမှတ်ပြုထားကြပြီး ဖြစ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ၁၃၂၁-ခုနှစ်မှ စ၍ ပြည်မြို့ တွင် ရွှေကျင်သာသနာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ ဤအတ္ထုပ္ပတ္တိ အရှင် ဗာရာဏသီ မဟာထေရ်နှင့်” ရထဒ္ဓေ မဂ္ဂယထာ” ရထားသံလမ်း ဥပမာ ဆရာဒကာ “ဥဘော အညောည နိဿိတာ” နှစ်မွှာဖြာ လျက် သာသနာပြုလာသော ၀ိ-ဗာတိုက် အမ- သခင် မကြီး ဒေါ်သိန်းတင်၏ ငယ်စဉ်ကစ ယနေ့ကျအောင် အဖြစ်အပျက် တေ့ဆက်စကား သင်္ခေပအနေ အားဖြင့် ဖော်ပြရပေဦးမည်။
၀ိသုဒ္ဓါရုံဗာရာဏသီတိုက်အမကြီး၊ ဆေးလိပ်ရုံပိုင်ရှင် န၀င်း-မသိန်းတင်၊ သမိုင်းဝင် သခင်မကြီး ဒေါ်သိန်းတင်၊ ၀ဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ရ ဒေါ်သိန်းတင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ကြီး ဒေါ်သိန်းတင်၊ နိုင်ငံဂုဏ်ရည် (ဒု) ဘွဲ့ရ ဒေါ်သိန်းတင် စသည်ဂုဏ်များဖြင့် မြန်မာတပြည်လုံး ညွတ်ရုံးထင်ရှားလတံ့သော ဒေါ်သိန်းတင်သည် နန၀ါသကုသ ရသေ့မြို့ခေါ် သီရိခေတ္တရာ-ပြည်မြို့၊ န၀င်းရပ်၊ အဘ- ဦးဖိုးဆိတ်+အမိ- ဒေါ်ရွှေထယ်တို့မှ ၁၂၆၇-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆုတ် (၂)ရက်၊ သောကြာနေ့၊ နံနက်(၅း ၀၀)နာရီအချိန်တွင် မီးရှုးသန့်စင် ဖွားမြင်သော သားသမီး (၈)ယောက်တို့တွင် အငယ်ဆုံး သမီးထူး သမီးရတနာဖြစ်သည်။
သင်္ခါရတရားတွေကို မသိခဲ့လို့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ အာဏာသိမ်းခဲ့မိတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနေ၀င်းက ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း ကိုကိုမောင်ကြီး (ဦးချစ်လှိုင်)ရဲ့ ကျွန်တော်သိသော တစ်ရံရောအခါများ စာအုပ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
၁၉၉၅ ဇူလိုင်လမှာ ဦးနေ၀င်းက သူ့ဆီသွားတဲ့ ဦးချစ်လှိုင်၊ မဆလခေတ် ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးတင်အောင်ဟိန်းတို့ကို ပြောလိုက်တာပါ တဲ့။
"ကိုယ်လူတွေနဲ့ ကြုံတုန်း ပြောလိုက်ရဦးမယ် .... ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒီသံသရာ တရားတွေ သင်္ခါရတရားတွေ အနိစ္စ .... အနတ္တတရားတွေကို ဒီနေ့ သိမြင်သလိုများ ဟိုတုန်းက သိခဲ့မယ် ဆိုရင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လက ကိစ္စကို ကိုယ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး .... ဟုတ်တယ် .... အဲဒီတုန်းကသာ ဒီတရားတွေကို သိနေခဲ့ရင် ၁၉၆၂ က လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်မျိုးကို ကိုယ်မလုပ်ခဲ့ဘူး" (စာ-၇၆၂)
ဦးချစ်လှိုင်က ဒါကို ကြားရတော့ "ဟယ်" ခနဲ ဖြစ်သွားပါတော့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
- -စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးဖြင့် မြန်မာပြည်သူ များအား လူမှုဒုက္ခ မျိုးစုံပေးနေခြင်းကို ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ဒီဆောင်းပါးလေး မရေးခင်မှာ ကျနော်တို့မွေးဖွားကြီးပြင်း လာရတဲ့ခေတ်ကို ယာက်တည်း ကျနော် ဘာသာ ပြန်ပြီး စဉ်းစားနေ မိပါတယ်၊ ကျနော်မွေးဖွား လာရတဲ့ ခေတ်ဟာ သေသေ ချာချာပြန်ပြီး စဉ်းစား လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ မှောင်ခေတ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ခေတ် စံနစ်ကြီးမှာ မွေးဖွားလာ ခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို ကျနော်ဘာသာ ကျနော်နားလည် လိုက်ပါတော့တယ်..
ဗိုလ်နေ၀င်း အာဏာ သိမ်းခဲ့တဲ့ခေတ်.။
နောက်ပြည်သူ တဦးချင်း ပိုင်ဆိုင်မှု့ ကိုလဲ အဓမ္မနည်းနဲ့ အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက် ပြီးတော့ ပြည်သူပိုင်ဆိုတဲ့ စကားလှလှ လေးတွေ သုံးပြီး တဦးတည်းပိုင်လုပ်တဲ့စံနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ် စံနစ် ဆိုပြီး ဗိုလ်နေ၀င်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ အာဏာသိမ်း အုပ်စိုးသူ တွေဟာ ဆိုရှယ်ကျကျ နေ .. လစ်ရင် လစ်သလို ခိုးတတ်တဲ့ ခေတ်စံနစ်ကြီးမှာ ကျနော် သင်ကြားခဲ့တဲ့ ပညာေ၇း အကြောင်းလေး ကိုလဲ စဉ်းစားမိပါတယ်.။
Labels: မြန်မာသမိုင်း, ဆောင်းပါးများ
ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးကာလ ဗမာပြည်တွင် ကွန်မြူနစ်ပါတီတရပ် ထူထောင်လိုက်နိုင်ခြင်းသည် နယ်ချဲ့လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်လိုသောပြည်သူများ အခွင့်အခါကောင်းယူနိုင်ရန် လက်မတင်အချိန်မီရုံလေး ဖြစ်နေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ ရှေ့ပြေးခြေလှမ်းများအဖြစ် နာဇီဂျာမဏီက ဥရောပတွင်မွှေနေပြီ ဖြစ်သည်။ “အင်္ဂလိပ်အခက်-ဗမာ့အချက်” ကာလ ကား ရောက်ခဲ့ချေပြီ။ သို့သော် မည်သည့်အချက် ယူရမည်နည်း ဟူသောနေရာ၌ မတူ ဘဲ ဖြစ်လာ ကြသည်။ မြန်မာပြည်ရှိ နိုင်ငံရေးသမားများကြားတွင် လမ်းစဉ်-၃-ခု ခွဲထွက်လာသည်။ ပထမလမ်းစဉ်ကို ကိုယ်စားပြုသူအစုက ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ မည်သူနှင့်မဆိုပေါင်းမည်ဟု ပြောကြ၏။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော် ...။ စစ်တပ်မှ ဒုတိယအကြိမ် အပြီးအပိုင်အာဏာမသိမ်းမီကာလ နွေရာသီရဲ့ ပူရှိန်ပြင်းပြင်း ... ကျောင်းဖွင့်ချိန် ... ဇွန်လဆန်း။ မန္တလေးတက္ကသိုလ်ပုရ၀ဏ်တွင် အဆောက်အအုံတွေက ဤမျှလောက်နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပူးကျပ်ကျပ်မရှိသေး - ပူပင်ပူအိုက်ငြားသော်လည်း တမာတန်းနှင့်စိန်ပန်းပင်အုပ်အုပ်တွေကြားက တချက်တချက်ဖြတ်သန်းလာသော သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေကို ရှူရှိုက်လိုက်ကြရလျှင်ငြီးစီစီဖြစ်နေသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားကြ၏။ ကျောင်းဆင်းကျောင်းတက်သွားကြ ပြန်ကြ၊ ဆိုင်များတွင် စားကြ၊ သောက်ကြ၊ သစ်ပင်ရိပ်များတွင် နားကြ၊ ခိုကြ။
အရှေ့ရှမ်းရိုးမဆီငေးကြမောကြ။ နယ်မှ ၁၆ နှစ် ၁၇ နှစ် ရွယ် ကျောင်းသား ၂ ယောက်သည် သင်တန်းတချိန်အပြီး မုန့်သွားစားလိုက်၊ ပင်မအဆောက်အအုံထဲဝင်လိုက်၊ စာသင်ခန်းတွေကိုလေ့လာကြည့် လိုက်နှင့် နောက်ဆုံး ပြတိုက်ရှိရာ ရာဇတ်အဆောက်အအုံဘက်ရောက်သွားကြသည်။ အောက်-အထက် တက်ကြည့်ဖြစ်ကြသည်။ တနေရာတွင် ကျက်သရေရှိလှသောလူတယောက်၏ ပုံတူပန်းချီကားတချပ်ကို မြင်လိုက်ကြရ၏။ မျက်နှာထားကြည်ကြည်လင်လင်နှင့် ပြေပြစ်ချောမောလှသော ထိုသူ၏ပုံကိုကြည့်ရင်း - “ဘယ်သူလဲ ?” ဟု တယောက်က မေးသည်။ ကျန်တယောက်က ခေါင်းယမ်းပြ၏။
နိုင်ငံတော် သီချင်းစာသားတွေကို ဘယ်သူတွေ စိတ်ကူးရခဲ...
သခင်အောင်ဆန်းကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သူ ရာဇဝတ်ဝန် မစ္စတ...